yanshinlinn on Flipboard
43 Flips |3Magazines |9Following | 1 Follower | @yslontheroad | Keep up with yanshinlinn on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “yanshinlinn”
Dhamma Panel Talk (Part I)
လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ် စရိုက်တွက်နည်း သိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ထပ်တွက် မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လဲတွက်ပေါ့ ။ ဒီနည်းကတော့ လူတိုင်းရဲ့ ပင်ကိုယ် စရိုက်ကို တွက်နည်းလေးပါ။ မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို အခြေခံပြီး ဟောတဲ့ နည်းလေးပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်နဲ့ မွေးနံကိုသိရင် သူရဲ့ပင်ကိုယ် အတွင်းသဘောကို သိနိုင်တဲ့ နည်းလေးမို့ ဆရာစံဇာဏီဘို ရဲ့ တွက်နည်းလေးကို သူငယ်ချင်းတို့အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ် လူတစ်ဦးဆီမှာ ပင်ကိုယ် `ဇ´ လေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ် ။ (0) လောဘကြီးသူ (1) ဒေါသကြီးသူ (2) မောဟစိတ်လွန်ကဲသူ (3) မေတ္တာစိတ်ရှိသူ (4)ဂရုဏာစိတ်များသူ (5) မုဒိတာ တရားလက်ကိုင်ထားသူ (6)ဥပေက္ခာသမား ဆိုပြီး (7)မျိုး ခွဲခြာထားပါတယ် .......။ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ...ကိုယ့်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တွက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်........................။ တွက်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် ကိုယ်ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်ရယ် ၊မွေးနံကို ဂဏန်းပြောင်းပြီး ပေါင်းပါ ရတဲ့ အဖြေ (7) နဲ့ စားရပါမယ် ထွက်လာတဲ့ အဖြေကတော့ ကိုယ့်ရဲ ပင်ကိုယ်စရိုက်ပေါ့ ။ ဥပမာ - ကျွန်တော့်ရဲ့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်က 1353 ခု သောကြာသားဆိုတော့ 6ပေါ့ 1353+6=1359 1359÷7=1 ကြွင်းပေါ့ မြန်မာမွေးနှစ်မသိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ http://www.mmcalendar.com/index.php အဲဒီထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်က မြန်မာခုနှစ်ပြောင်းပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ် . ကဲ .....အောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စရိုက်လေးကို ကြည့်ကြတာပေါ့ .... အကြွင်း (0) လောဘ သူကတော့ လိုချင်စိတ်များတယ် ။ရတာနဲ့ မတင်းတိမ်ဘူး ။ရောင့်၇ဲတဲ့ စိတ်မရှိဘူး ။ရောက်တဲ့ နေရာမှာ မပျော်ဘူး ဒီထက်သာယာတဲ့ဘ၀ကို လိုလားတဲ့ သူ။ တစ်ခုမပြီးခင် နောက်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ် ဘယ်အရာမဆို လက်ဝါးကြီး အုပ်ချင်တယ် ။ ဘယ်တော့မှလည်း နောက်လိုက်မလုပ်ချင်ဘူး ။ ကိုယ်ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် ဘယ်အရာကိုမှ မထောက်ထားဘူး မှားသည်မှန်သည် မခွဲခြားဘူး ဘယ်နည်းနဲ့ မဆို ရအာင်ယူမှ ကျေနပ်တဲ့ သူ။ လိုချင်စိတ်များတော့ ဘာမဆိုလုပ်ရမှာ ၀န်မလေးသူပေါ့။ ချမ်းသာလိုတယ် ကြွယ်ဝလိုတယ် ချမ်းသာချင်ကိုလဲ ရမဲ့ သူ။ ဒါပေမဲ့ မှားလား မှန်လား တရားဝင်လား တရားမ၀င်လား တွေးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခတော့ တွေ့နိုင်တာပေါ့ ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ သူကဘ၀ကို ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ ဖြတ်သန်းမည့်သူပါ။ သူတစ်ပါးမှာရှိတာထက် လိုချင်စိတ်မြင့်မားနေတော့ လူတော်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ လိုချင်တဲ့ စိတ်ကလေးကို စနစ်တကျ အသုံးပြုသွာမယ်ဆိုရင် ဒိတ်ဒိတ် လူသားဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာ အမှန်ပါ ။။။။။။။ အကြွင်း (1) ဒေါသ စိတ်ကြီးတယ် မဟုတ်မခံစိတ်များတယ် မတော်မတရား လုပ်တာတွေ့ရင် ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လဲ ၀င်ပါဖို့ ၀င်ပြောဖို့ ၀န်မလေးတဲ့သူ ဘေးကနေ အလိုလို ဒေါသထွက်နေတတ်တယ် ။ စိတ်တိုဒေါသထွက်ရင်လဲ ဘာမဆို လုပ်ပစ်ပြောပစ်လိုက်မှ ကျေနပ်တဲ့သူပေါ့ ။ စိတ်ကသာကြီးပါတယ် သူ့နှလုံးသားကတော့ ဖြူစင်လွန်းပါတယ် ။ ဘယ်တော့မှလဲ ကိုယ့်ဘက်ကစပြီး ရန်မလုပ်ဘူး သန့်သန့်လေးပြောတတ်ဆိုတတ်တယ် ။ လာစော်ကားပြီး လာငြိပြီ ဆိုရင်တော့ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ် အထိ လိုက်မဲ့သူပဲ ။ ပင်ကိုစိတ်ရင်းကောင်းတယ် ။ သူတစ်ပါးကို ပေးရမှာ ကျွေးရမှာ ထိပ်ဆုံးကပေါ့ ။ဒါပေမဲ့ စိတ်မြန် ဒေါသ ထွက်လွယ်တာကြောင့် အန္တရာယ် အမြဲ ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ စိတ်မြန်ပုံကတော့ ဖိနပ်စီးရတာ ခက်နေရင်တောင် ဖိနပ်ကိုကန်ထုတ် ရန်လုပ်ပြီး ဖိနပ်မပါပဲ လျှောက်သွာတတ်တဲ့ သူမျိုး။ ကိုယ်ကို လာစော်ကားလာရင်လဲ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တာကို စဉ်းစားပြီး စိတ်ထဲမှာ တစ်နုံ့နုံ့နဲ့ တွေးပြီး ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဒေါပွနေတတ်တယ် ။ အဲဒီစိတ်ကလေးကို ထိန်းနိုင်တဲ့ နေ့ရောက်ရင် ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့ လမ်းပေါ်ကို စရောက်တဲ့နေ့ပါပဲ ။ ဘယ်သို့ဆိုစေ ``လူဖြောင့်စိတ်တို´´ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အလွန်ရိုးဖြောင့်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။။။။ အကြွင်း (2)မောဟ သိပ်တွေဝေတတ်တယ် ဘယ်အရာမဆို ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင် မချနိုင်ဘူး ။အရာရာကို မေ့လျှော့နေတတ်တယ် ။ တစ်ခါတစ်လေး ငေါင်တောင်တောင်နဲ့ ငေးမောနေတတ်တာတောင်တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ သီးသန့်နေလို့စိတ်ပြင်းတယ် ။ပြသနာတစ်ခု တစ်ယောက်ထဲ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး မြွေမသေ ဒုတ်မကျိုး လုပ်တတ်တယ် ။ အလွန်တော်တဲ့ ဖြန်ဖြေရေးသမာလေး။ ကြားဝင်ဖြေရှင်း ရမယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်နှခွ မြင်တဲ့သူ။ အပြောအေးအေးလေးနဲ့ ကျလောက်အောင် ပြောတတ်တဲ့သူ။ သူ့၇ဲ့ ရိုးပုံအေးပုံကြောင့် လူတိုင်းက ခင်ကြတယ် ။ သူကတော့ ရောက်တဲ့နေရမှာ ပျော်အောင်နေမယ် ။ ပြသနာတွေ့ရင်တောင် ဒါတွေကို မေ့လျှော့ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်နေမဲ့ သူပဲ ။ဒါ့ကြောင်ဘာကိုမှ လေးလေးနက်နက် မရှိဘူးလို့ အထင်ခံရတတ်တယ် ။ စကားသာ ကျလောက်အောင်ပြောတာ တစ်ခါတစ်လေ ရှေ့နောက်မညီ ပြောပြီးတာတွေ မေ့တတ်ပြန်တယ် ။စိတ်ဓာတ်တတ်လွယ် ကျလွယ်တယ် ။ အရာရာ မပြတ်မသား နှောင့်နှေးလွန်းတော့ ဘ၀အခွင့်အရေး တွေ မကြာခဏ လက်တစ်လုံးကြား ဆုံးရှုံးရတတ်တယ် ။ သူ့ဘ၀ကို နိုင်နိုင်နှင်းနှင်း ပဲ့ထိန်းပေတဲ့ သူရှိမှ သူဘ၀က ဟန်ကျမယ် ။ နောက်ကတစ်ချိန်လုံး လိုက်ပြောနေမှ တန်ရုံကျမှာ ။အပြောခံရလို့ စိတ်ဆိုးမှာတော့ မပူနဲ သူကဘယ်တော့မှ မှတ်မထားလို့ပါ ။ အကြွင်(3) မေတ္တာ သူကတော့ မေတ္တာ ရှင်ကြီးပေါ့ ။အားနာတတ်တယ် ၊ယုံစားလွယ်တယ် ၊သူတစ်ပါးအပေါ် ခွင့်လွတ်နားလည်စိတ်ရှိတယ် ။ သည်းခံစိတ်ရှိတဲံ့နေရမှာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး အောချရလောက်တဲ့  အထိပေါ့။ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။လူသားအားလုံးအေ ပ်ါလေးလေး စားစား ဆက်ဆံတတ်တယ် ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ နှိမ့်ချနေတတ်တယ် ။သူအနေနဲ့ ရိုးပေမဲ့ သွားအထင်မသေးပါနဲ့ သူ့မှာချစ်တဲ ခင်တဲသူတွေ အလွန်ပေါတဲသူပါ ။လမ်းလေဂျပိုး လူမိုက်ကအစ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး အထိ သူ့ကိုခင်ကြတယ် ။ အရေးအကြောင်းဆို ကူညီဖို့အသင့်ပဲ ။မြင့်မြတ်တဲံ့ စိတ်သဘောထား အပေါ် လူတိုင်းက နေရာပေး ဆက်ဆံကြတယ် ။ရန်သူအပေါ်မှာတောင်မေတ္တာထား တော့ ဘေးလူတွေနာမလည် အားမလိုအား မရ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ရန်သူကိုမေတ္တာနဲ့  အဆုံးမှာ စည်းရုံးနိုင်တဲ့ သူပါ ။စိတ်သဘောထား ကြီးတယ် မဟုတ်တာ မလုပ်တဲ့သူ။ ဘယ်သူ့ကိုမဆို တန်ဖို့းထားဆက်ဆံတတ်တယ်။အပြောသမားမဟုတ်ဘူး လက်တွေ့ဆန်တယ် ။အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့သူ။ အချစ်မေတ္တာ အပေါ် အလေးအနက်ထားတယ် ။ အခက်အခဲ ကိုရင်ဆိုင်ရရင်တောင် မေတ္တာ ရှေ့ထားပြီး အောင်မြင်မှုကို ရယူတဲ့သူ ပါ ။ အားလုံးသိပါတယ် အောင်ခြင်(8)ပါးကို မြတ်စွာဘုရားက မေတ္တာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တာကိုလေ။ အကြွင်း(4)ဂရုဏာ ရင်တဲမှာစာနာတတ်တယ် ၊ ခံစားတတ်တယ်၊ ကြင်နာတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိနေတယ် ။ သိပ်ကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်တယ်။ ချစ်သူခင်သူဖြစ်စေ သတ္တ၀ါတွေကိုဖြစ်စေ ``သနားပါတယ်နော်´´ ဆိုပြီး စာနာစိတ်နဲ့ အမြဲ ကူညီလို့စိတ်ရှိတယ် ။သနားအောင်ပြောရင် ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးနေပါစေ ခွင့်လွှတ်တယ် ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရန်သူကိုတောင် သနားတတ်တဲသူ ။စိတ်ဆိုးလဲ ခဏပဲ ။ရန်သူကို သူ့ခမျာ ငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံး ရန်လိုနေတာ သနားပါတယ်တဲ့လေ။ဒါပေမဲ သူကသူတစ်ပါးအပေါ် ဂရုနာထားသလိုသူ့အပေါ်မှာ ဂရုစိုက်မှ ကျေနပ်တတ်တဲသူ။ သူကိုဂရုမစိုက်ဘူး အလေးမထာဘူး အချစ်ပေါ့တယ်လို့ ထင်ရင် စိတ်ကောက်ပြီး ၀ုန်းတိုင်းကျဲ အရွဲ့တိုက်တတ်သူ။ ၀မ်းနည်းလွယ်တယ် တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တယ် ။ ငါကောင်းသလောက်ငါ့အပေါ်မကောင်းဘူးလို့ စိတ်ဝင် ၀မ်းနည်းသွာပြီဆိုရင် အမြန်လေးသာ ချော့လိုက်ပါ ။လူပုံစံ စတိုင်၊ ဟန်ပန်က အစ ပြုမူပြောဆိုပုံက မာကျစ်ကျစ် ၊ဘုခွပြော၊ မသနားတတ်တဲ့ ကြင်နာစိတ်မရှိတဲ့ သူလိုအပြင်ပန်းမှာ ပေါ်နေတယ် ။ တကယ်အတွင်းစိတ် ရင်ထဲမှာတော့ ဂရုဏာ အပြည့်ရှိတဲသူပါ ဂရုဏာကြီးတဲ့ ဟန်ဆောင်နေတဲ့ သူနဲတော့ တခြာစီပေါ့ ။သူ့သဘော သူ့သဘာဝ သူ့မနောကိုသိတဲ့ သူတွေကတော့ လေးလေးစားစား နဲ့ သူ့အရိပ်ကို ခိုဝင်ကြတယ် ။ ဦးဆောင်သူ ၊ဆရာတွေ ၊ သမားတော်တွေ တော်တော်များများကတော့ ကရုဏာရှင်တွေပေါ့ ။ အကြွင်း(5)မုဒိတာ မုဒိတာကို လက်ကိုင်ထားနိုင်သူမျိုးကတော့ ရှားပါးလှပါတယ် ။သူကတော့ ရှားရှားပါးပါးထဲက သူတစ်ယောက်မို့ လူတစ်သောင်းမှာ တစ်ယောက်တွေ့ခဲလှတဲ့ မုဒိတာ ပွားနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့ ။သူတစ်ပါးအောင်မြင်တာ ၊ချမ်းသာကြွယ်ဝတာ ၊ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်တာ၊နာမည်ကြီးတာ ၊ငွေရတာ ၊အလုပ်တိုးတတ်တာ တွေ့ရင် ကိုယ်ကပဲ ဒါတွေကို ခံစားနေရသလိုလိုနဲ့ ပိတိဖြာပြီး ဘေးကနေကြည်နူးနေတတ်တဲ့ သူမျိုး ဒီကမ္ဘာမှား ရှားပါတဲသူပေါ့။ မနာလို ၀န်တိုစိတ်မရှိဘူးအတင်းအဖျင်းမပြောတတ်ဘူး ၊မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ် ။အရာရာ ရင်ထဲ ခံစားပြီးမှ လုပ်တတ်ပြောတတ်တဲ့သူ ။မှန်ကန် မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုထိတ်တန်းရောက်တယ်။ ကိုယ်က သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာ ၊သူတစ်ပါးကို ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်ပြီး ဒုက္ခပေးတာမျိုးလုံးဝမုန်းတီးတယ် ။ ကိုယ်ကလဲ မလုပ်ဘူး၊လုပ်ရပ်တွေကိုလဲ လက်မခံဘူး ။ရှောင်ရှားတယ် ။.သူတစ်ပါးအားနည်ချက်အားသာချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ချီကျူးပြီးကောင်းတဲ့ အပြုသဘောတွေကို အကြံပေးမှုလေးတွေကြောင့် သူ့ကိုချစ်ခင်သူတွေပေါတယ် ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်မရှိပဲ သူတစ်ပါးအပေါ် မျှဝေခံစား တတ်လို့ ကြီပွားအောင်မြင်မှာ မလွဲပါဘူး ။အရာရာ အပေါ်မှာ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နဲ့ ဖြစ်ထွန်းစေသလို ကိုယ်တိုင်လဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မှန်ှမှန်နဲ့အမြဲကြိုးစားနေတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့  နှလုံးသား ပိုင်ရှင်တစ်ဦးပါ ။ အကြွင်း(6)ဥပေက္ခာ အလွန်ထူးခြားတဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်ပေါ့။ ဘာသိဘာသာ အေးအေးဆေဆေးပဲ နေတတ်တယ် ။ သူုတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်အောင် အမြဲကြိုးစာနေတတ်တယ်။ ၀င်ပြီး စွတ်ဖက်တဲ့ သဘာဝ ကင်းတယ် ။ရန်သူကိုတောင် ဒေါသထွက်ပြီး ရင်မဆိုင်ပဲ မသိသလို့ ကိုယ့်ကို ရန်လုပ်တာ မဟုတ်သလို့ ခပ်မဆိတ်နေတတ်တယ်။ ဥပေက္ခာပြု ကျောခိုင်းနေတတ်တယ် တည်ကြည်တည်ငြိမ်ပြီး လူးသားအာလုံးကို ကိုယ်စိတ်ကမှန်တယ်ထင်တာလုပ်နေကြတာပဲတဲ့ ။ ဘာဝင်စွတ်ဖက်စရာလို့လဲဆိုတဲ့ သဘော ထားတတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ၀န်းကျင်အလုပ်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်တတ်လို့ အောင်မြင်ကြီးပွားကြပါတယ် ။ ထူးခြားချက်က အနေအေးပြီး အရာရာ ကိုမသိဘူးမထင်နဲ့ ။ အရာရာကို သိတယ် လေ့လာတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲ လေ့လာနေတယ် ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းဆက်တွေအပေါ် နားလည်လွန်းလို့ အရာရာကို အပြစ်မမြင်ပဲ နေတတ်တဲ့သူ ။ အခက်အခဲတွေ ၊ ဒုက္ခတွေကို သူ့ဆီမှာ အကူညီတောင်း ကြည့်။ ကိုယ့်ပြသနာ တစ်ခုကို သူ့ပြသနာတစ်ခုလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သဘောထာပြီး ကူညီမှာသေချာတယ် ။ကိုယ်နဲ့ မပတ်သက်သမျှ ၀င်မပါဘူး။ ကိုယ်နဲ မိတ်ဆက်မပေးသမျှ မည်မျှမျက်မှန်းတန်းနေပါစေ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ယဉ်ကျေးတယ် သိမ်မွေ့တယ် ၊ အရေကြုံလာရင် တကယ်အားထားရတယ် ။ အကယ်ကို အမြင်ကြည်လင်တဲ့ သူတွေပေါ့ ။တစ်နေ့မှာသူဟာ ဘာသာ သာသနာအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သူ တွေလို့ ရှေ့ပညာရှိတွေက ဆိုပါတယ် ။ Credit - ဆရာ စံဇာဏီဘို
အင်တာနက်လိုင်း မြန်အောင်လုပ်နည်း နဂိုရှိမှ နားကိုင်းထွက် ဆိုသလို နဂိုအဝင် အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းရင် ကိုယ်ရမယ့် Output အင်တာနက်လိုင်းကလည်း မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ Waste ဖြစ်သွားတာတွေလည်း မိမိ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးတည်းမှာ တင် အများကြီးရှိနေတတ်တော့ မကောင်းတဲ့ ကော်နက် ရှင်က တက်ကို မလာဘူး ဖြစ်သွားရပါရော။ ဒီလို အလဟဿ ဖြစ်သွားမယ့် Bandwidth တွေကို Waste မဖြစ်ပဲ အပြည့်အဝ အသုံးချလိုက်ရင် အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်က အနည်းနဲ့အများ ပြန်တက် လာမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးက အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ် ပါတယ်။ ၁။ Bndwidth မြင့်ခြင်ှးStart Menu >Run > gpedit.msc ဟူသော စာကို ရိုက်> Enter ခေါက်။ Screen ဘယ်ဘက်က administrative templates ကိုရွေး> Network ကိုရွေး> QoS packet scheduler ကို click နှိပ်>limit reservable bandwidth ကို click နှိပ်။ Enabled ပြောင်း၊ Bandwidth ကို0သို့ထား။ လက်ရှိ အင်တာနက် မြန်နှုန်းထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်ပါတယ်။ ၂။ Window network socket reset လုပ်ခြင်း OS တစ်ခုကနေ အချက်အလက်တွေကို ပို့ဖို့အတွက် network socket များအား အသုံးပြုပါတယ်။ သူတို့က ကြာလာရင် overload ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုရလေးစေပါတယ်။ run>cmd ရိုက် enter ခေါက်> command prompt တက်လာရင် netsh winsock reset စာကိုရိုက် Enter ခေါက်> ပြီးရင် ကွန်ပြူတာကို Restart လုပ်ရပါမယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်မြန်သင့်သလောက် မြန်လာမယ့်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခြားနည်းလမ်းများ ရှိရင်လည်း စာဖတ်သူတို့ လာရောက် မျှဝေ နိုင်ပါတယ်။ -- Ref: freak အောင်ခမ်း (www.smart.com.mm) Aye Chan Mon# Credit To :Smart Pro Journal> ပြန်လည် မျဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်
ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော အတွေးအခေါ်များ
Thanks to sponsors, spectators, contestants, volunteers and partners, the Monterey Peninsula Foundation has raised over $110 million for charity through the AT&T Pebble Beach National Pro-Am since the tournament began in 1937.
သုံးရက်အတွင်း အဆုတ်သန့်နည်း<p>သင့်အဆုတ် ကျန်းမာချင်ပါသလား။ အောက်ပါ နည်းလမ်း ခုနစ်သွယ်တို့ဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးပါ။ (၁) ဂရိတ်ဖရုသီး (သို့မဟုတ်) …
ပိုက်ဆံမရှိသော်လည်း လှူဒါန်းနိုင်သော အလှူ (၇) မျိုး အခါတစ်ပါး၌ လူငယ်တစ်ယောက်သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ “အကျွန်ုပ်သည် မည်သည့် အရာကိုပဲ လုပ်လုပ် မအောင်မြ မင် ဖြစ်နေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်ပါသနည်း” ဟု မေးလျှောက်သည်။ “အသင်သည် အလှူဒါနမပြုတတ်၍ ဖြစ်သည်” ဟု မြတ်စွာဘုရားက ဖြေကြားတော်မူသည်။ ငွေကြေးတစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မရှိသော ဆင်းရဲသား အကျွန်ုပ်ဖို့ မည်ကဲ့သို့ အလှူဒါနပြုနိုင်ပါမည်နည်း။ ‘ အသင်ဤသည်ကို မှတ်သားလော့။ တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူသည် ငွေကြေးမရှိသော်လည်း ပေးကမ်းနိုင်သော အလှူဒါန ခုနှစ်မျိုးရှိသည်။ ထိုခုနှစ်မျိုးမှာ ... ၁။ မျက်နှာဟန်အမူအရာဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း - အပြုံးဖြင့်ဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံခြင်း၊ ၂။ နှုတ်ဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း - အားပေးစကား၊ နှစ်သိမ့်စကား၊ ချီးကျူးစကား၊ ညှာတာစကား၊ နွေးထွေးသောစကားများ၊ ပြောဆိုခြင်း။ ၃။ စိတ်ဖြင့်အလှူဒါနပြုခြင်း - စိတ်တံခါးကိုဖွင့်၍ သူတစ်ပါးကို ပွင့်လင်းရိုးသားစွာ ဆက်ဆံခြင်း၊ ၄။ အမြင်ဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း - ကောင်းသောစေတနာ အမြင်ဖြင့် သူတပါးကိုကြည့်မြင်တတ်ခြင်း၊ ၅။ ကာယလုပ်အားဖြင့် အလှူဒါနပြုခြင်း - ကိုယ်နိုင်နင်းသော လုပ်ဆောင်ပေးမှုဖြင့် သူတစ်ပါးကို ကူညီခြင်း၊ ၆။ နေရာထိုင်ခင်း အလှူဒါနပြုခြင်း - လှေစီး၊ ကားစီးသည့်အခါ မိမိထိုင်ခုံနေရာကို အိုမင်းမစွမ်းသူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသူ၊နှင့် ကလေးငယ်တို့အား မိမိ၏ထိုင်ခုံနေရာကို ထိုင်စေခြင်း။ ၇။ နေအိမ်အလှူဒါနပြုခြင်း - မိမိ၏ အိမ်နေရာကိုသူတပါးတို့ အနားယူရန် ပေးကမ်းခြင်း။ မည်သူမဆို ဤအလှူဒါန ခုနှစ်မျိုးသောကောင်းမှု ကုသိုလ်ကို ပေးကမ်းလေ့ရှိသည့်အကျင့် ကောင်းရှိလျှင် အောင်မြင်ခြင်းသည် ထက်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါလာမည်သာဖြစ်ပါသည်။ Aye Aye Thant
အနာရွတ် တွေက ကြည့်ရ ဆိုးပါတယ်။<p>အထူးသဖြင့် ဘောင်းဘီ တိုတို ဝတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လေးတွေ သတိထားပါ။ အနာရွတ် အသေးဆုံး ဖြစ်အောင် သို့မဟုတ် အနာရွတ် ပျောက်အောင် …
Bigger. Faster. Stronger. Louder! Congrats for the new Superbowl Champions 2014! #Superbowl,#Seahawks!
သမီး လမင်းကြီး ကအေးချမ်းတယ် ကြည်နူးစရာကောင်းတယ် ချစ်စရာကောင်း တယ် လို့ သမီးမြင်ပါလိမ့်မယ် နေမင်းကြီးက ပူလောင်တယ် အေးမျမှု ကို မပေးဘူး ပူလောင်မှုကို ပေး တယ်လို့  သမီးထင်ပါလိမ့်မယ် တကယ်တော့ သမီး ထင်နေတဲ့ လမင်းအလင်းရောင် ကို မြင်ရဘို့ နေမင်း ကြီး က အလင်းကို ပေးခဲ့ရတာပါ နေမင်းကြီး မရှိဘဲနဲ့ လမင်း ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ဆိုတာ ဖြစ်မလာဘူးသမီး ဒီလိုပါဘဲ လောကကြီးမှာ အဖေ ဆိုတာ မရှိဘဲ နဲ့ အမေ ဆိုတာ ဖြစ်မလာဘူး အဖေနဲ့ အမေတို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှု တခုနဲ့ လူ့လောကမှာ သမီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ အမေဆိုတဲ့ လမင်းအလင်းရောင်ကို သမီးမြင်ရဘို့ အတွက် အဖေဆိုတဲ့ နေမင်းကြီးဆိုတာ ရှိစမြဲပါ ပူလောင်မှုတွေကို ပေးခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်ဆို အဖေဟာ အဖေပါဘဲသမီးရယ် အေးချမ်းမွန်
အရွယ်တင် နုပျိုလိုသူတိုင်း ညဘက်လုပ်သင့်သည့် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်း တစ်နေ့လုံး အလုပ်မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ခဲ့ရ၊ ကလေးတွေကို ထိန်းခဲ့ရ၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ရ….. ဒီလိုအချက်တွေကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ အသားအရေဟာ ထိခိုက် ညစ်နွမ်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ထိခိုက်ပျက်စီးတာ အချိန်ကြာလာရင် အသားအရေ အိုမင်းလာပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ညဘက်မှာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်တာကြောင့် အရေပြားရဲ့ တင်းအားနဲ့ အရောင်ကို ကောင်းမွန်စေနိုင်ပြီး အရေပြား အပြစ်အနာအဆာတွေကို လျော့ကျစေကာ အရေပြားကို စိုပြည်တင်းရင်း လှပစေပါတယ်။ ညဘက်မှာ အသားအရေကို ကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းမှု လုပ်တာကြောင့် အရေပြားကို လေဝင်လေထွက် ကောင်းစေပြီး အနာကျက်စေကာ အရေပြားကို တင်းရင်းလှပစေပါတယ်။ အောက်ပါတို့က ညဘက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းအတွက် အခြေခံအချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး သင်က မိတ်ကပ်လိမ်းသူဖြစ်ရင် ပထမဆုံးအချက်က မိတ်ကပ်ဖျက်ဖို့ အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး (Make-up Remover) ကို သုံးပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာသစ်ပြီးရင် သင့်မျက်နှာမှာ အညစ်အကြေးနဲ့ မိတ်ကပ်တွေ ကြွင်းကျန် ကပ်ငြိတာမျိုးမဖြစ်ဘဲ သန့်စင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အရေပြားရဲ့ စံဓာတ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းဖို့ အယ်လ်ကိုဟော မပါတဲ့ တိုနာထဲစိမ်ထားတဲ့ ဂွမ်းစနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်ရင် အဆီတွေပါ ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (၂) မျက်နှာသစ်ဆေး မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းအရေပြားကို မျက်နှာသစ်ဆေး လိမ်းပြီး ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးမှ ကြက်သီးနွေးရေကို သုံးပြီး မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို သေချာ ဆေးကြောပေးပါ။ မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ သစ်တာကြောင့် အရေပြားပေါ်က အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ပိုးမွှားတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ ကြက်သီးနွေးရေက ချွေးပေါက်ကို ပွင့်စေပြီး ချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို ထွက်ရှိ သွားစေပါတယ်။ ပြီးရင် မျက်နှာကို ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပေးပါ။ (၃) အိုင်းခရင်မ် မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်မှာ အဆီဂလင်း မရှိတဲ့အတွက် မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက် အရေပြားမှာ အိုင်းခရင်မ် လိမ်းတာက အရေပြားကို အားဖြည့်ပေးပြီး မျက်ဝန်းအိတ် ဖောင်းတာနဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာတို့ကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ညဘက်မှာ အိုင်းခရင်မ် လိမ်းပြီးမှ အိပ်ရာဝင်ပါ။ (၄) နှုတ်ခမ်းထိန်းသိမ်းမှု နှုတ်ခမ်းသားကို ကြက်သီးနွေးရေထဲ ဆွတ်ထားတဲ့၊ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ အဝတ်စနဲ့ ညင်ညင်သာသာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးရင် ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ ပြီးရင် နှုတ်ခမ်းသား စိုပြည်တင်းရင်းအောင် နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး အဆီဆိုးပေးပါ။ (၅) အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ် အရေပြားကို စိုပြည်စေမယ့် အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ကို လိမ်းပါ။ အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ကို ရွေးချယ်ရာမှာ ဓာတုပစ္စည်း မပါတာရွေးပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်ဟာ အရေပြားဆဲလ်သေ၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကြောင့် အရေပြား ညစ်နွမ်းမှုတို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး အရေပြားကို ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆဲလ်သစ် ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးပြီး အရေပြား တင်းရင်းစေတဲ့ ကော်လာဂျင်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးပါတယ်။ အရေပြားပေါ်က အမည်းစက်၊ အရေးကြောင်း၊ သက်ကြီးအစက်အပြောက်နဲ့ ပါးရေတွန့်တာတွေကိုလည်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။ Tip! ညဘက်မှာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အချိန် ငါးမိနစ်လောက်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် အချိန်ငါးမိနစ်ပေးပြီး အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတာကြောင့် နုပျိုတဲ့ အသွင်ကို ဖြစ်စေရုံသာမက အရေပြားကို ချောမွေ့ နူးညံ့ကြည်လင်စေပါတယ်။ မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်တွေလိမ်းပြီး ဘယ်တော့မှ မအိပ်ပါနဲ့။ မိတ်ကပ်တွေလိမ်းပြီး အိပ်တာကြာလာရင် အသားအရေကို နွမ်းနယ် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံနဲ့ အဖုအပိမ့်တွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ် ထိန်းခရင်မ်နဲ့အတူ Serum ကိုပါ လိမ်းပေးရင် အသားအရေကို ပိုမို တင်းရင်းစေပါတယ်။ အရေးကြောင်းပါးပါး ထင်နေတဲ့ နေရာတွေကို များများလိမ်းပြီး အိပ်စက်ပေးပါ။ ဇွန် Credit to Shwe Beauty Photo by ပျိုမေတို့သိစေဖို့
အိမ်ထောင်ရေး ရွေးချယ်မှု ဘာသာမတူ ၊ အိမ်ထောင်မူ...အယူပျက်လိမ့်မည်.....။ အယူပျက်ရာ ၊ ထိုအခါ .....ဘုရားကွယ်လိမ့်မည်......။ ဘုရားကွယ်ရာ ၊ ထိုအခါ ချမ်းသာပျောက်လိမ့်မည်..။ ချမ်းသာပျောက်ရာ ၊ ထိုအခါ......မျိုးပါပျောက်လိမ့်မည်...။ လူမျိုးပျောက်ရာ ၊ ထိုအခါ.....ပြည်ပါပျောက်လိမ့် မည် ....။ ပြည်မပျောက်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး ....မနှေးရှောင်ရမည်.......။ လူမျိုးမပျောက်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး....... မနှေးရှောင်ရမည်......။ ချမ်းသာမပျောက်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး...... မနှေးရှောင်ရမည် ....။ ဘုရားမကွယ်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး..... မနှေးရှောင်ရမည်....။ အယူမပျက်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး.... မနှေးရှောင်ရမည်.....။ သာရဏီယကထာ ဘဒ္ဒန္တကုမာရ ဒုတိယနာယကဆရာတော် မြတောင်စာသင်တိုက် ပန်းတနော်မြို့ 
သင့်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများက ပြောပြနေသော သင့်ကျန်းမာရေး ====================================== (ပျိုမေတို့သိစေဖို့ မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်) သေးငယ်သော နားရွက်များရှိလျှင် သေးငယ်တဲ့ နားရွက်ရှိတာက ဆွဲဆောင်မှု ပိုမိုရှိစေပေမယ့် နှင်းခူရောဂါနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေကို ပိုဖြစ်လွယ်စေပါတယ်။ “သေးငယ်တဲ့ နားရွက်တွေဟာ သေးငယ်တဲ့ နားစည်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နားရွက်မှာ နှင်းခူဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်” လို့ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဂျော့ရ်ှက ဆိုပါတယ်။ နားစည်က တခြား ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပရှိ အရေပြားတွေလိုပဲ အရေပြား ဖုံးထားတာကြောင့် နှင်းခူအဖတ်တွေဖြစ်ကာ ကွာကျတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် နားအပြင်ကို လွင့်သွားသင့်ပေမယ့် သေးငယ်တဲ့ နားစည်က ဖယ်ထုတ်နိုင်စွမ်း ခက်တဲ့အတွက် အထဲမှာ စုဆောင်းကာ ယားယံမှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နားရွက်သေးငယ်တာက ကျောက်ကပ် ဝေဒနာနဲ့လည်း ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ နားရွက်အစုံရှိရင် ဘာကြောင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတာ မသိကြသေးပါဘူး။ သေးငယ်တဲ့ နားရွက်တွေရှိရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရနိုင်ခြေ များတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက ဆိုထားပါတယ်။ လျှာကြီးလျှင် အိပ်ပျော်စဉ် အသက်ရှူ ခေတ္တရပ်တဲ့ဝေဒနာ အဖြစ်များပြီး ဗြိတိန်သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသား လေးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီး နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတို့မှာ အဖြစ်များတဲ့ ဝေဒနာပါ။ “သင့်လျှာက ကြီးနေရင် ဒါမှမဟုတ် အာသီးက ကြီးနေရင် အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ ဒါက အသေးအမွှား ပြဿနာဖြစ်ပါက အိပ်ရင် ဟောက်သံထွက်ပါလိမ့်မယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ပြဿနာဖြစ်ရင် အိပ်ရင်း စက္ကန့် ၃၀ လောက် အသက်ရှူ ခေတ္တရပ်လိုက်၊ ပြန်ရှူလိုက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လျှာက မေးရိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့် လျှာကြီးတဲ့အခါ မေးရိုးက နောက်ဘက်ကို ပြန်ရောက်သွားပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ အိပ်ပျော်စဉ် အသက်ရှူခေတ္တရပ်တာနဲ့ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ ရုတ်တရက် လျော့ကျမှုတို့က ဆက်စပ်နေပြီး သွေးတိုးတာနဲ့ နှလုံးသွေးကြောစနစ် အပေါ်မှာလည်း ဖိအားသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ တင်ပါကြီးလျှင် သစ်တော်သီးပုံ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်တွေ အနေနဲ့ သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအား ကျဆင်းနိုင်ခြေ များပါတယ်။ ချီကာဂိုရှိ အနောက်မြောက်တက္ကသိုလ် လေ့လာသူတွေက အသက် ၆၅ နဲ့ ၇၈ ကြား သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီး ၈၇၅၀ ဦးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ မှတ်ဉာဏ်စစ်ဆေးမှု ရမှတ်ကို လေ့လာခဲ့ရာ တင်ပါးကြီးလေလေ၊ မှတ်ဉာဏ်စစ်ဆေးမှု ရမှတ်နည်းပါးလေလေ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ တင်ပါးအဆီတွေဟာ ဦးနှောက်ဆီ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကို ကန့်သတ်ထားနိုင်တာကြောင့် တွေးခေါ်မြော်မြင်နိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ “လေ့လာမှုအရ BMI ရမှတ် ၃၀၊ ၃၁ လောက်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးအားလုံးဟာ တွေးခေါ်မြော်မြင်နိုင်စွမ်းအား ကျဆင်းနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တင်ပါးအရွယ်အစား ပိုကြီးလေလေ၊ မှတ်ဉာဏ်ရမှတ် ပိုလျော့နည်းလေလေ ဖြစ်နေပါတယ်” လို့ ဘားနတ်ဆေးရုံက သားဖွားမီးယပ်အထူးကု နီတူက ဆိုပါတယ်။ တင်ပါးကြီးတာက မကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခါးပတ်လည်မှာထက် တင်ပါးတစ်ဝိုက် အဆီတွေ စုပုံနေတာက ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ ပန်းသီးပုံခန္ဓာကိုယ်ရှိသူတွေက နာတာရှည်ရောဂါ ပိုအဖြစ်များတာကို တွေ့ရှိထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းများ ရှည်သွယ်လျှင် အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ လက်ချောင်းအလျားဟာ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဝါးဝစ်ခ်တက္ကသိုလ် လေ့လာမှုအရ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ အမျိုးသား သုံးထောင်နဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိသူ ၁၅၀၀ ဦးတို့ရဲ့ လက်ချောင်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့ရာ လက်ညှိုးက လက်သူကြွယ်ထက် ပိုရှည်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း သိသိသာသာ လျော့နည်းကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မမွေးဖွားခင် တက်စတိုစတီရုန်းအဆင့် ထိတွေ့မှုနည်းတာက လက်ညှိုးကို ပိုရှည်စေပြီး နောက်တစ်ချိန်မှာ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။အယ်လ်ဘာတာတက္ကသိုလ် လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ မိန်းကလေးလို လက်ချောင်းရှည်သွယ်တဲ့ အမျိုးသားတွေက စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်ခြေ ပိုများကြောင်း သိရပါတယ်။ အော်တစ်ဇင်ရောဂါရှိသူ ကလေးတွေမှာ လက်ညှိုးထက် လက်သူကြွယ်က ပိုရှည်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မမွေးခင် တက်စတိုစတီရုန်း ထိတွေ့မှု မြင့်မားနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေချောင်းများ ရှည်လျှင် သင့်ခြေညှိုးက ခြေမထက် ပိုရှည်ရင် ခြေထောက်နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ခြေညှိုးရှည်တဲ့သူတွေ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ နာကျင်မှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ခြေထောက်အရိုးတစ်ခုဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အားသက်ရောက်မှု ရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုအနေနဲ့ နာကျင်မှု သက်သာစေဖို့ စတီးရွိုက်ထိုးဆေးကို သုံးဖို့လိုသလို ခွဲစိတ်ကုသမှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ခြေချောင်းတွေက ခြေဖမိုးနဲ့ ယှဉ်လို့ သိသိသာသာ ရှည်လျားလွန်းရင် တာတိုအပြေးပြိုင်ရာမှာ ထူးချွန်တတ်ပါတယ်။ ခြေချောင်းရှည်လေ၊ ခြေထောက်ပိုသန်စွမ်းလေဖြစ်ပြီး မြေပြင်နဲ့ ကြာကြာထိတွေ့အား ကောင်းတာကြောင့်ပါ။ ပေါင်သေးလျှင် ပေါင်တုတ်တာကြောင့် ရှက်ရွံ့နေသလား။ ပေါင်သေးတိုင်းလည်း မကောင်းပါဘူး။ ပေါင်သေးသွယ်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးနိုင်ခြေ ပိုများကြောင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးထောင်နီးပါးအား ဒင်းနစ်လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ပေါင်ကြွက်သားထုထည် နည်းပါးတဲ့အတွက် အင်ဆူလင် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိစေတာကြောင့် နှလုံးထိခိုက်မှု ဖြစ်ရတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ထင်မြင်ထားကြပါတယ်။ မျက်စိကြီးလျှင် မျက်စိကြီးမားလေလေ၊ အနီးမှုန်ဖြစ်နိုင်ခြေ များလေလေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မျက်စိအတိုင်းအတာက ပျမ်းမျှ အရွယ် ၂၄ မီလီမီတာထက် တစ်မီလီမီတာ ပိုများရင်တောင် အနီးမှုန်ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အလင်းရောင်ဟာ မျက်စိအာရုံခံလွှာ အရှေ့ရှိ တစ်မီလီမီတာပေါ်မှာ ဆုံချက်ကျရောက်စေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်တိုလျှင် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ ဘရစ္စတောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ခြေထောက် အရှည် ၄ ဒသမ ၃ စင်တီမီတာ ရှည်တိုင်း ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းကြောင်း သိရပါတယ်။ “သင့်မိခင်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာရှိစဉ် အာဟာရမပြည့်ဝခဲ့တာကြောင့် သင့်မှာပိုသေးငယ်တဲ့ ခြေထောက်တွေ ရှိနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ အာဟာရနည်းတဲ့အတွက် မွေးပြီးချိန်မှာ အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ပန်ကရိယက အဆီနဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပုံမှန် ပမာဏကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခြေထောက်တိုတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်မှာ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါလို ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ များရတာပါ” လို့ လန်ဒန် ဟော်မုန်းဗေဒဆရာဝန် မာ့ခ်က ရှင်းပြပါတယ်။ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) Photo by ပျိုမေတို့သိစေဖို့
မိန်းကလေးများ သတိပြုဖွယ်အချက်များ ======================== (ပျိုမေတို့သိစေဖို့မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်) ၁။ ။ ညအချိန်မှာ ဓါတ်လှေကားနဲ့ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦကို လူစိမ်းယောကျာ်း တစ်ဦးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း တူတူတက်ရဖို့ အခြေအနေကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်... လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ ဓါတ်လှေကားထဲကို ဝင်လိုက်ပါ... ပြီးရင် ကိုယ်သွားရမယ့် အထပ်ထိ အထပ်တိုင်းရဲ့ ခလုတ်ကို အကုန်နှိပ်လိုက်ပါ... ဥပမာ ကိုယ်သွား ရမယ့်အထ ပ်က ၉ လွှာဆိုရင် ၁ကနေ ၉ အထိ အကုန်နှိပ်ထားလိုက်ပါ... အထပ်တိုင်းမှာ ရပ်မယ့် ပွင့်မယ့် ဓါတ်လှေကားထဲမှာ သင့်ကိုဘယ်သူကမှ တစုံတရာ ထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး.... ၂။ ။ မိမိတစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ ရှိနေစဉ် လူစိမ်းတစ်ဦးဝင်လာပြီး ကိုယ့်ကို တစုံတရာ ဒုက္ခပေးဖို့ ဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်... ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ မီးဖိုထဲကိုပြေးပါ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငြုတ်သီးမှုန့် ဘယ်မှာထား တယ်... ဓါးကဘယ်နေရာမှာ ထားတယ်ဆိုတာကို သင်က လူစိမ်းထက်ပိုသိလို့ပါပဲ... ဒီပစ္စည်းတွေ က လူတစ်ယောက်ကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ လက်နက်တွေ ဖြစ် တဲ့အတွက် မိမိ ကိုယ်ကို ခုခံနိုင်အောင် အခွင့်အရေးများစွာ ရစေမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ... ဒါမှမဟုတ် အိုးခွက်ပန်းကန်တွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းဖို့ အချိန်တစ်ခု ရစေနိုင်ပါတယ်... သင့်ရဲ့အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းသံဟာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဝင်လာသူ ဒုစရိုက်သားတွေ အတွက် အကြောက်ဆုံးအရာ တစ်ခုဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့... ၃။ ။ ညအချိန်မတော် တစ်ယောက်တည်း Taxi စီးရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ရင်... လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ ကားထဲကို မဝင်ခင် ကားနံပတ်ကို မှတ်သား ထားပါ... ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်း တစ်ဦးဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး မိမိ ဘယ်ကား နံပတ်၊ ဘာကားအရောင်နဲ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာကနေ Taxi စီးလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကားဒရိုင်ဘာ နားလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ဖုန်းပြောပါ... တကယ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖုန်းခေါ်လို့ မရလည်း ဖုန်းဆက်လို့ ရတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဟန်ဆောင် ပြောပါ... ကားဒရိုင်ဘာဟာ သူ့ရဲ့ အချက်အ လက်တွေ ကို နောက် ထပ်သိတဲ့ လူတစ်ဦးဦးရှိနေကြောင်း သိနေတဲ့အတွက် မကောင်းမှု တစုံတခု လုပ်ဖို့ အတော် ဝန်လေးသွားပါလိမ့်မယ်... သင့်ကို မကောင်းတာ တခုခုလုပ်ရင် သူ့မှာလည်း ဒုက္ခရောက်နိုင် တာကြောင့် သင့်သွားလိုတဲ့နေရာကိုသာ တန်းတန်းမတ်မတ် ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်... ဒီလိုနည်းနဲ့ Potential Attacker တစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ Protector တစ်ယောက် ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်... ၄။ ။ အကယ်၍ Taxi Driver က လူရှင်းတဲ့လမ်း သို့မဟုတ် သင်သွားမယ့် နေရာနဲ့ မဆိုင်တဲ့လမ်း ထဲကိုမောင်းဝင်သွားခဲ့ရင်... သင်အန္တရာယ် ဧရိယာထဲရောက်ရှိနေပြီလို့ ခံစားရရင်... လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ သင့်လက်ကိုင်အိတ်ရဲ့ လက်ကိုင် သို့မဟုတ် လည်ပင်းမှာ ပတ်တဲ့ ပဝါအရှည်ကို အသုံးပြုပြီး ကားမောင်းသူရဲ့ လည်ပင်းကို နောက်ကနေ ရစ်ပြီး ခပ်တင်းတင်း ဆွဲထားလိုက်ပါ... သင့်မှာ လက်ကိုင်အိတ်ရော ပဝါရှည်လို လည်ပင်းကို ရစ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုမှ မပါရင်တော့ ကားမောင်းသူရဲ့ အင်္ကျီကော်လံနှစ်ဖက်ကနေကိုင်ပြီး ခုံနောက်ကနေ တင်းတင်းဆွဲထားလိုက်ပါ... အင်္ကျီအပေါ်ဆုံး ကြယ်သီးက ခုနက ပစ္စည်းတွေလိုပဲ ကားမောင်းသူကို လည်ပင်းအစ်စေပြီး သင့်ကို အန္တရာယ်က လွတ်ဖို့ အခွင့်အရေးတခုခု ရရှိစေနိုင်ပါတယ်... ၅။ ။ ညအချိန် တစ်ယောက်ယောက် နောက်ကနေ လိုက်ခြင်းခံရရင်... ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် အိမ်တစ်အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်ပါ... သင်ကြုံတွေ့နေ ရတဲ့ အခက်အခဲကို ရှင်းပြပြီး အကူအညီရယူပါ... ညဥ့်နက်လို့ ဆိုင်တွေလည်း မဖွင့်၊ အိမ်ထဲလဲ ဝင်ဖို့ မလွယ်ကူရင် ATM စက်ခန်းထဲကို ဝင်လိုက်ပါ... ATM box တွေတိုင်းလိုလို လုံခြုံရေး Camera တပ်ဆင်ထားပြီး၊ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ လုံခြုံရေးအမြဲရှိနေတတ်တဲ့ အတွက်ပါပဲ... လူသိမခံလိုတဲ့ ဒုစရိုက်သမားတွေအတွက် ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းများဟာ သင့်အတွက် လုံခြုံမှုဖြစ်စေ မှာ ဖြစ်ပါတယ်... -------------===------------- ဒီစာလေးကို တွေ့မိဖတ်မိတဲ့အခါ မိန်းကလေးများအတွက် အမှန်တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘာသာပြန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... သင်လည်း သင်ဂရုစိုက်တဲ့ အစ်မ၊ ညီမ၊ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး များအ တွက် ပြန် လည်လက် ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးကြပါ လို့လေးစားစွာ တိုက်တွန်းတင်ပြရင်း... --- Credit to Original Uploader Photo by ပျိုမေတို့သိစေဖို့
ခြင်းလုံးဒီပလိုမေစီ နှင့် ခြင်းလုံးဒီမိုကရေစီ " Monday, February 3, 2014 ပြီးခဲ့သည့် ၂၇ ကြိမ် မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲက မြန်မာနိုင်ငံကို သိသာထင်ရှားသော အောင်မြင်မှုနှစ်ခုကို ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟုထင်သည်။ တစ်ခုမှာ ဘာသာနှစ်ခုအကြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပြဿနာများကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ပါ့မလားဆိုသော နိုင်ငံအချို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်း နှင့် နောက်တစ်ခုမှာ မြန်မာ့ ရိုးရာအားကစားနည်းတစ်မျိုး ဖြစ်သော မြန်မာ့ရိုးရာခြင်း ခတ် ကစားနည်းပညာကို ကမ္ဘာကသိရှိအံ့သြ သွားအောင် ဖော်ထုတ်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့၍ ခြင်းလုံး ဒီပလိုမေစီ အောင်ပွဲရရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ” အစကတော့ အိမ်ရှင် မြန်မာတွေက ခြင်းခတ်ကစား နည်းကိုထည့်သွင်းကစားစေတာဟာ မြန်မာတွေ ရွှေများများရချင်လို့ တမင်သက်သက် လုပ်တာလို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကစားနည်းဟာ အနုပညာမြောက်ပြီး တကယ်ခက်ခဲတဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကတောင် တန်ဖိုးထားလေးစားပြီး လေ့လာသင်ယူနေကြတဲ့ အားက စားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တာကို အာဆီယံဆီးဂိမ်းက တစ်ဆင့် ကမ္ဘာကသိအောင် တင်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်” ဟု ခြင်းပညာရှင် တစ်ဦးက ဆိုသည်။ ” မြန်မာနိုင်ငံ ခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းမှာ ခြင်းခတ်ကစားနည်းကို ထည့်သွင်းကျင်းပနိုင်ဖို့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့ နိုင်ငံများကို မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းခတ်နည်း သရုပ်ပြသင်ကြားပေးဖို့ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး စေလွှတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အာရှပိုက်ကျော်ခြင်း အဖွဲ့ချုပ်က အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို ဆီးဂိမ်းမှာ မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းခတ် ကစားနည်း ပါဝင်နိုင်အောင် စည်းရုံးပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်က ရိုးရာခြင်းလုံး ပြိုင်ပွဲဧည့်သည်တွေ အ တွက် အသာစီးရဖို့ ဦးတည်ပြီး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကို ရေးဆွဲထားတာပါ။ ပြီးတော့ဒီကနည်းပြတွေကို စေလွှတ်ပြီး ကောင်းကောင်း သင်ပြပေးနေတာပါ။ ဆီးဂိမ်းမှာခြင်းအားကစားနည်း ရှစ်မျိုးထည့်သွင်းထားပေမယ့် ခြောက်မျိုးပဲ မြန်မာက ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိစေတာပါ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးရဲအောင် က ပြောကြား ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေခြင်းလုံး ဒီပလိုမေစီအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ခြင်းလုံးဖြင့် ပထမဆုံးရွှေဆုကို တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်ရယူခဲ့သလို မြန်မာ့ခြင်းလုံးကစား နည်းကို မြန်မာပြည်သူများရော၊ ပြည်ပမှ ပရိသတ်များကပါရင် သပ် ရှုမောကြည့်ရှုခဲ့ကြရကာ ဝေဖန်မှုများကို တိတ်ဆိတ်စေခဲ့ ပါသည်။ ခက်ခဲနက်နဲသည့် ရိုးရာခြင်းလုံး ကစားနည်း မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းခတ်ကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အချိန်က စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကတော့ အငြင်းပွားဖွယ်များရှိနေသေးသည်ဟု ဆိုကြစေကာမူ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ထုတ် ဆဋ္ဌမတန်း မြန်မာဖတ်စာအုပ်၌ ပြ ဋ္ဌာန်းချက်အရ သရေခေတ္တရာမှ ရရှိသော ငွေ ခြင်းလုံးသည် ပြည်မြို့ဘော ဘောကြီးဌာပနာတိုက်မှ ရရှိခဲ့ သည် ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ခဲ့သည်။သို့သော်လည်း ဤ တွေ့ရှိချက်သည် မှန်ကန်မှုမရှိ ကြောင်း၊အမှန်မှာ ၁၉၂၆ ခုနှစ် က ပြည်ခရိုင်မှော်ဇာအရပ် ခင် ဗကုန်းမှရရှိ ခဲ့သော ငွေခြင်းလုံး သာဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်ကို ပြင် ဆင်ပေးစေလိုကြောင်း ခြင်းလုံး ပညာရှင် ဦးဘသိန်းက ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်၊မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ထုတ် ဟံသာတီ သတင်း စာတွင် ဖော်ပြခဲ့လေသည်။ သို့ဆိုလျှင် မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းခတ် အားကစားနည်းသည် အေဒီ ၇ ရာစုရှေးဟောင်းပျူခေတ်ကာလကပင် ရှိခဲ့သည်ဆို သောပြောဆိုချက်မှာ မှန်ကန်သည် ဟု ဆိုနို င်ပြီး အေဒီ၁၉ ရာစု နှောင်းပိုင်း ပုဂံမင်းလက်ထက် တွင်မှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာ သည် ဆိုသော အဆိုကိုပယ်ရ မည်ဖြစ်ပေသည်။ ခင်ဗကုန်းဆိုသည်မှာ ပျူ ခေတ်လက်ရာများ တူးဖော်ရရှိ ခဲ့သည့်နေရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ခင်ဗကုန်းကျောက်စာမှာလည်း မြန်မာဘာသာဖြင့် အစောဆုံး တွေ့ရ သည့် ကျော က်စာဟု ဆို ကြသည်များလည်း ရှိပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် မြန်မာ့ရိုး ရာ ခြင်းလုံး ခတ်အားကစား နည်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၅ဝဝ ခန့် ကပင် ပေါ်ထွန်း ခဲ့သည်ဟု ဆို နိုင်ပါသည်။ကုန်း ဘောင် ခေတ် အမရပူရမြို့ တည်နန်းတည် ဘိုး တော်ဘုရား ပဒုံ မင်း လက်ထက် ၁၁၅၃ ခုနှစ်က အမိန့် တော်အရခြင်းပွဲကို ပီပီ ပြင်ပြင်မှတ် တမ်း တင် ဖော် ပြထားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရခြင်းကလည်း ခြင်းခတ် ကစား နည်းသည်အစော ပိုင်းက နန်းတော်ရှိ မင်းဆွေမင်းမျိုး ပရိ သတ်များ ကြည့်ရှုရန် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခဲ့ သည့် မင်းပွဲစိုးပွဲများဖြစ်ခဲ့ သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် လူသာမန်မျာကြားအထိ ခေတ်စားလာခဲ့သည်ဟု ဆိုပါ သည်။ သူ့ကျွန်ဘဝကျရောက်စဉ် က ဆိုလျှင်ခြင်းပွဲများသည် အမျိုး သားရေး လက္ခဏာတစ်ရပ် အသွင် ရှိနေခဲ့သည်။ ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် ခြင်းလုံးဆရာ ဖြစ် သင်တန်းကိုစ တင် ခဲ့ပြီးနိုင်ငံ အနှံ့ အပြားတွင်ခြင်းလုံးခတ် အသင်း များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။၁၉၃၉-၄ဝကာလများက ဆိုလျှင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ နိုင်ငံခြား အားကစားနည်း များ ဖြစ်ေ သာ ဘောလုံး၊ တင်းနစ် အစရှိသည်တို့အတွက် နှစ်စဉ် ထောင်ချီ၍ အကုန်အကျခံ အားပေးခဲ့သော်လည်း မြန်မာ့ခြင်းလုံး ကစား နည်းအတွက်ကိုမူ တက္ကသို လ်ကြီး တစ်ခု လုံးအတွက် တစ် နှစ်လျှင် ကျပ် ၁ဝဝ သာ သုံးစွဲခွင့်ပြု ခဲ့သည် ကိုတွေ့ရသည်။သို့အတွက် မြန်မာ့ ခြင်းလုံးကို နှစ် သက်သော တက္က သိုလ် ကျောင်းသား များ မှ ထိုစဉ်က ပင်းယ ကျောင်းဆောင် အဆောင် မှူးဦးဘသန်း ကို အကြောင်းပြု၍ အရေး ဆိုကြရာမှ ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁ဝဝဝအထိတိုးတက် ခွင့်ပြုလာ ခဲ့သည်။ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာပင် မြန်မာ့ ခြင်းခတ် အားကစားနည်းပညာ မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ဥရောပသို့တိုင် သွားရောက် ခတ်က စားခြင်းဖြင့် ပြ သနိုင် လာကြလေသည်။ ခြင်းလုံးခတ်ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်း ၁၉၅၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့မှ အစပြု၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာခြင်းလုံး ညီလာခံ သို့ပြည်ထောင် စု မြန် မာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ ၃၃ ခရိုင်မှ တက် ရောက်လာသည့်ကိုယ်စား လှယ် များက” ခြင်းလုံးခတ်ပြိုင်ပွဲ စည်းမျဉ်း” ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ သည်။ ထိုစည်းမျဉ်းများတွင် ပြိုင်ပွဲ အဆင့်ခြင်းခတ်ပုံခတ် နည်း၊ အမှတ်ပေးပုံပေးနည်းနှင့် အခြေခံ အသေးစိတ်စည်းမျဉ်း များကို ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ ခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်တည်ရှိရာ အမှတ် ၅၄၉ ကုန်သည် လမ်းဌာနချုပ်မှ စာအုပ်အဖြစ် ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှ စ၍ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဗမာပြည်အိုလံပစ်ပွဲတော်၌ ဗမာ့ ခေတ်သတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင် မိုးကြိုးဦးအုန်းခင်၏ ငွေဒိုင်း ကြီးကို ယှဉ်ပြိုင်ရယူရန် နှစ်စဉ် ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်းဖြင့် မြန် မာ့ခြင်းခတ်ပြိုင်ပွဲအသွင် ပေါ် လွင်လာပြီး ခြင်းလုံးကစားသမား များအနေဖြင့် တူညီအားကစား ဝတ်စုံများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ ခရိုင်အလိုက် အမှတ်တံဆိပ်များ တပ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်ကြခြင်းဖြင့် ခြင်း ပညာအဆင့်ကိုမြှင့်တင်နိုင် ခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိဘုရား ကြီး အရှေ့ဘက် ၄၅ တာကွင်း၌ ကျင်းပသောဝါဆိုခြင်းမှာ ယခု ထိတိုင်အောင် ရိုးရာမပျက်ဆင်နွှဲလျက်ရှိသော မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းပွဲတော်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ မန္တလေးမြို့မှ ခြင်းပညာ ရှင် ဦးဘသိန်းသည် ၁၉၅၂ မှ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်အထိ မန္တလေး ခရိုင်ခြင်းခတ်အသင်းနှင့် ဝါဆို ခြင်းခတ်အသင်းတို့တွင် အတွင်း ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့ပြီး ၁၉၅၆ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ အိုလံ ပစ်ပွဲတော်၊ ၁၉၅၆ နှင့် ၁၉၅၇ ခုနှစ် ခရိုင်ပေါင်းစုံ တံခွန်စိုက် ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၁၉၅၆ အောင် ဆန်းကွင်း၊၁၉၅၉တောင်ကြီး၊ ၁၉၆၂ မြင်းခြံတို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ခြင်းလုံးညီလာခံများသို့လည်း တက်ရောက်ပြီး ၁၉၆ဝတွင် ခြင်းလုံး ဒိုင် အဖြစ် ဆောင် ရွက် ပေးခဲ့သည်။ ခြင်းပညာတွင် ခြင်းအမှတ် ခတ်နှင့် ခြင်းအလှခတ်ဟူ၍ရှိပြီး ခြင်း အလှခတ်ပြိုင်ပွဲများတွင် အမှတ်ပေးသည့် ဒိုင်လူကြီးက အော်၍ အမှတ်မပေးနိုင်ခြင်း ကြောင့် အနိုင်အရှုံး ဆုံးဖြတ် ရာတွင် အငြင်းပွားရသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရာခြင်း ပညာရှင် မန္တ လေး ဦးဘသိန်းက ၁၉၆ဝ ပြည့် နှစ်က ရန်ကုန်မြို့ အောင်ဆန်း ကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သော ခြင်း ညီလာခံ၌ မန္တလေးခရိုင်ခြင်း အဖွဲ့ကို ကိုယ်တိုင်အော်၍ အများ ရှေ့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အမှတ်ပေးသည့် စနစ်ကို တင်ပြ ခဲ့ရာအဖွဲ့ချုပ်ကလက်ခံအတည် ပြုပေးခဲ့၍ ယနေ့တိုင် ဦးဘသိန်းတီထွင်သော အမှတ်ပေးစနစ်ကို အသုံးပြု၍ အမှတ်ပေး သည်ဟု ဆိုပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၂၁ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့သော မန်းရာ ပြည့်ပွဲကြီးတွင်လည်း မန္တလေး ခရိုင်ခြင်းအဖွဲ့က ၁ဝ ညတိုင်တိုင် ခြင်း အလှခတ် ကစားကာ ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဦးဘ သိန်းသည် ထို ခေတ်ကပင်ခြင်းပွဲများ တွင် မိုက်ဖြင့် ဟစ်အော် ၍ ခြင်းခတ်နည်းများကို ဟောပြောခဲ့သည့် ပထမဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ခြင်းလုံးဒီပလိုမေစီ ၁၉၆ဝ ပြ ည့်နှစ်၊ အောက် တိုဘာလက တရုတ်-မြန်မာ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ရေးအောင် မြင်သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ပီကင်း တွင် လူထုတစ် သိန်းေ ကျာ်ရှေ့ မှောက်၌ ဦးဘသိန်းအပါ အဝင် ခြင်းပညာရှင် ခြောက်ဦးက မြန် မာ့ရိုးရာခြင်းခတ်ပညာကို ခတ်ကစားပြသခဲ့ပြီး နောက် ပီကင်း သာမက ရှင်ယန်း၊ နန် ကင်း၊ ရှန် ဟဲ၊ ဟန်ကျိုး၊ ကွမ်တုံ၊ ကူမင်းမြို့ကြီးများသို့ပါ ၃၈ ရက်ကြာ ခြင်းခတ်ကစားပြခဲ့ရပါ သည်။ မြန်မာ့ခြင်းလုံး ဘယ်လိုရက် မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာ အရခြင်းလုံးကို ကြိမ်ဖြင့်ထိုး၍ ရက်လုပ်ရပါသည်။ ကြိမ်ကိုပင် ကြိမ်တိုင်းရက်၍မရပါ။ ခြင်း လုံးမရက်လုပ်မီ ကြိမ်လုံးများ ကို ပျော့ပျောင်းနူး ညံ့အောင် စိမ် ထားရပြီးမှ ကြိမ်ထိုးရသည်။ ကြိမ်နန်းဆွဲသည်ဟုလည်း ခေါ် ပါသည်။ ထိုနန်းဆွဲထားသော ကြိမ်စငယ် ၆ ပင် မှ ၁ဝ ပင် အထိ နန်းအကြီးအသေး အထူ အပါးကိုလိုက်၍ ခင်းလုံးရက် လုပ်ကြရသည်။ ခြင်းလုံးရက်ရာတွင် ငါးထောင့်ပေါက် ၁၂ ပေါက်ထားလျက်အလုံး ဖြစ်စေရန် ခြောက်ပတ်ရစ်၍ ရက်လုပ်ရသည်။ သာမန်အားဖြင့် လူကြီးထွာဆိုင်ခန့်သာ အဝန်းရှိပြီး ကြိမ်ကောင်းပါက “ထပ်” “ထပ်” နှင့် ခတ်၍ ကောင်းလှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင်ခြင်းလုံးရက်ရာတွင် လုံးဝန်းပြီး အချိုးညီလှပစေရန် ဝါးသပ်လျှို၍ ရက်လုပ်ကြပြီး ရက်လုပ်ပြီးခြင်းလုံးကို မန်ကျည်းရွက်ကို ရေတွင် ထည့်ထားပြီး ခြင်းလုံးကို ထည့်ပြုတ် ရသည်။ ပြီးလျှင် ခြင်းလုံးကို နေလှမ်းရသည်။ သို့မှသာ ခြင်းခတ်လျှင် ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲတက်၍ ခတ်ကောင်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ခြင်းခတ်ကစားနည်း မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းခတ်ကစားခြင်း နည်းပညာက အနုပညာရသပါပြီး ခက်ခဲသော ကစားနည်းတစ်မျိုးပါ။ ခြင်းခတ်ကစား ခြင်းကို ဆိုင်းနှင့်တွဲ ဖက်ဖျော် ဖြေနိုင် သလို နောက် ခံတီးပေးသည့်ဆိုင်းအဖွဲ့တွင် အဆိုပညာရှင်များကလည်း ခြင်းခတ် ကစားနေလျက်မှာပင် အားမာန်တက် ကြွစေသောတေးသီချင်းများဖြင့် ဧည့်ခံဖျော်ဖြေနိုင်ကြပါသည်။ ခြင်းခတ်ကစားနည်းကို ရှေးယခင်ကဆိုလျှင် အသေခတ်နှင့် အရှင်ခတ်ဟူ၍ရှိခဲ့ပြီး အသေခတ်ဆိုသည်က ခြင်းလုံးလေးငါး ရှစ်လုံးကိုလူတစ်ယောက်တည်း က ညှပ်ခြင်း၊ တင်ခြင်း၊ တစ်လုံးပေါ်တစ်လုးဆင့်၍လည်းကောင်း၊ တံကောက်ကြား၊ ပခုံးကြား၊ ခြေဖျားကြားတွင် ညှပ်၍လည်း ကောင်း၊ နဖူးပေါ်၊ ဒူးပေါ်၊ ခြေ ဖျားပေါ်တင်၍ လည်းေ ကာင်း အလှပြခတ်ကစားခြင်းကို ခေါ် ပါသည်။ အရှင်ခတ်ဆိုသည်က ခြင်းလုံးကိုအရှင်ထား၍ ခြင်းယိုင်ခတ်နည်းဖြစ်သည်။ ခြင်းယိုင်ခတ်ဆိုသည်မှာ ခြင်းကို လက်မှလွဲ၍ ကျန်ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းနှင့် ခတ်ခြင်း ကို ခေါ် သည်။ အယိုင်ခတ်တွင် ခြင်းကို အရှိန် မပြတ်စေဘဲ လူးလာတုံ့ ပြန်ကူးလူးခတ်ကစားခြင်းဖြစ် ပြီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် အရဆိုလျှင်သတ်မှတ် ထားေ သာ စည်းဝိုင်းသည် အချင်း ၂၁ ပေ၊ သို့မဟုတ် ၁၄ တောင်ရှိရပြီး ခြင်းခတ်သူ ၆ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခြင်းခတ်ကစားနည်းများတွင် ခြင်းရိုး၊ ခြင်းလတ်၊ဝိုင်းခြင်း၊ ဘေးဖနောင့် နှစ်ထပ်ခြေဖျား၊ နှစ်ထပ်ခြေခွင်၊ ဖီလာဖနောင့်၊ ခြေခွင်၊ခြေဖျား၊ ဒူး၊ ဖဝါးစသည် တို့ဖြစ်ပြီး ခြင်း အလှခတ်တွင် စလွယ်၊ မဟာ၊ မဟာညွန့်၊ ကုမ္ဘာဏ်၊ စသည့် ခြင်းခတ်နည်း များရှိပါသည်။ ခြင်းအလှခတ်သူကို ခြင်းမင်းသားဟုခေါ်ကြပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ ခတ်နိုင်သူ ကို ခြင်းဝိဇ္ဇာ ဟုခေါ်ကြကာ ခြင်းဝိုင်းများတွင် ခြင်းလုံးမြေမကျအောင်ထောက် ကူခတ်မပေးသူကို ခြင်းထောက် ဟု ခေါ်ပါသည်။ ခြင်းဒီမိုကရေစီ တကယ်တော့ ခြင်းခတ်ပညာသည် တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်း အလှခတ်ပြသနိုင်သလို ဝိုင်းဖွဲ့၍ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပေးအယူ မျှတစွာဖြင့် အထောက်အမအလှ အတင်ခတ်ပြနိုင်သည့် လွန်စွာဒီမိုကရေစီကျသော ကစားနည်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဝိုင်းခြင်းခတ်ရာတွင်တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်း အစွမ်းပြ ခြင်းကင်း၍ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖေးမရသည်။ ခြင်းလုံးမြေမကျ အောင် တစ်ဦးကခတ်နေစဉ် တစ်ဦးက ခြင်းလုံးကို ထိန်းမနိုင် ရန် အဆင်သင့်ရှိနေရသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြိုင်ဆိုင်ရန် မလို။ ခြင်းခတ်သူတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းပြခွင့်ရှိသလို အဖွဲ့လိုက်လည်း ပညာစွမ်းပြသ နိုင်သည်။သည့်ထက် ဒီမိုကရေ စီနည်းကျသော အားကစား နည်းမရှိပြီ။ ခြင်းခတ်နည်းပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် ရှိသည့်အနက် ခြင်းကြီး ၁ဝ မျိုးမှာ မဟာ၊ မဟာဒူး (ကုမ္ဘာဏ်)၊ ဝိုက်ကြီး၊ စလွယ်ကြီး၊ တည့်ဖဝါး၊ တည့်ဖနောင့်၊ မဟာညွန့်၊ ညွန့်ဒူး၊ နဂါးပတ်ဖဝါး၊ နဂါးပတ်ဖနောင့်တို့ ဖြစ်ပြီး ခေတ်ဆန်းခြင်းပေါက်များမှာ သမင်လည်ပြန်ဖနောင့်၊ မြင်းစီးဖနောင့်၊ လျှပ်ပူး၊ မန္တလာခြေဖျား၊ လေဝဲစသည် တို့ဖြစ်သည်။ခြင်း ပညာမှာ စာတွေ့ဖြင့် သင်ယူနိုင်သော ပညာရပ်မဟုတ်ပါ။ ခြင်းခတ်နည်းပညာ စာအုပ်တွေရှိပါသည်။ စာတွေ့ကို လက်တွေ့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး အရိုး၊အကြောပျော့သည့် ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ်ဘဝမှာပင် ခြင်းလုံးကို နှစ်ရှည်လေ့ကျင့်ခတ်ကစားသူများက ပိုပြီးကျွမ်းကျင်သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နှစ် ပေါက်အောင် လေ့ကျင့်ခတ် ကစား လျှင်သော်မှ ဖော်ပြပါ ခြင်းပေါက်များကို အလုံးစုံခတ်နိုင်သူ ဖြစ်လာဖို့တော့ ခဲယဉ်း လှပါသည်။ ခြင်းလုံးခတ်က စားနည်းပညာသည်ခက်ခဲလှကြောင်းကို ၁၉၈၁ခုနှစ်က ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တိုပန်းခြံတွင် မြန်မာများ ခြင်းခတ်သည်ကို ကြည့်ရင်း ခြင်းခတ်ပညာကို ဝါ သနာပါပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ အခေါက်ပေါင်း များစွာ လာရောက်ကာမန္တလေးတွင် ခြင်းပညာကို သင်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့သူ၊မှော်ဘောလုံး Mystic Ball ခေါ် မြန်မာ့ရိုးရာခြင်း လုံးခတ်ကစားသည့် ၈၃ မိနစ် ကြာပြသရသည့် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ရှစ်နှစ်ကြာဖန်တီးခဲ့သူ၊ ယင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြင့် ဆုပေါင်းများစွာရရှိပြီး ကမ္ဘာကျော် ခဲ့သူ၊ ၁၉၈၁ မှ ၁၉၉၇ အထိ ခြင်းခတ်ပညာသင်ယူခဲ့သည့်တိုင် ခြင်းလုံးကို တော်ရုံတန်ရုံ လောက်သာ ထိန်းခတ်နိုင်ခဲ့သူ ကနေ ဒါနိုင်ငံသား Greg Hamilton က သက်သေထူလျက်ရှိ ပါပြီ။ ဂါးရက်ဟာမီလ်တန်က သူ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ဤသို့ နိဂုံးကမ္ပတ်အဆုံးသတ်ထားပါသည်။ ” သူဟာမြန်မာ့ခြင်း ကမ္ဘာသို့ ပျံ့နှံ့သိရှိစေရေးအတွက် ဤကစားသမားများနှင့်အတူ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးထွက်ရန် အိပ်မက်တွေ ရှိနေပါသေးသည်” တဲ့။ မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ၂ဝ၁၄ ဘရာဇီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲဖွင့်ပွဲတွင် မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံး အလှပြသရုပ်ဖော်ကစားပေးရန် ကမ်းလှမ်းမှုများ ရှိနေသလို စင်ကာပူနိုင်ငံ တွင်ကျင်းပမည့် ၂၈ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးတွင်လည်း မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းခတ်ကစားနည်းကို ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြု သွားမည်ဟု လည်း သိနေရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံးအိပ်မက်တွေ တကယ် ဖြစ်လာပါတော့မည်။ သိန်းအေး ရည်ညွှန်း- (၁)အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာများ (၂)ပညာကျော်များ၏ခတ်ချက်များ By Stroke of Genius (ဧရာဝတီ) (၃)နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ့ရိုးရာခြင်း ပညာရှင်ပီကင်းပြန် ဦးဘသိန်း (ဒေါက်တာအောင်ဇော်) (၂)ဗမာ့ခြင်းလုံး (ဗိုလ်ကြီးခင်မောင်) အတွဲ(၅)၊အမှတ်( ၁)၁၉၅၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်း Popular Journal
“အချစ်နဲ့ Sex ကို မရောထွေးပါနဲ့” Monday, February 3, 2014 လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူငယ်တွေရဲ့အကြား Sex Education နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ပျံ့ပွားမှု ဘယ်လောက် ရှိနေသလဲ၊ ဒီအပေါ်မှာ လူငယ်တွေက ဘယ်လိုလက်ခံသလဲ၊ ပညာပေးဖြန့်ဝေမှုတွေ အနေနဲ့ရော ဒီလိုပညာပေးရာမှာ ဘယ်လို အခက်အခဲ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိသလဲဆိုတာကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အမျိုးသမီး ဆရာဝန်များအဖွဲ့က ဒေါက်တာ ဒေါ်နုနုဆွေကို ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာ အေးချမ်းမြေ့က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။ မေး။ ။ အခု မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် Sex Education ပေးနိုင်မှုက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေလောက် မလုပ်ပေးနိုင် သေးတဲ့အခြေအနေမှာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ အနေနဲ့ ဒီလို Sex ကိစ္စကို စမ်းသပ်ပြီဆိုရင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေက ဘာတွေရှိနိုင်မလဲ။ ဖြေ။ ။ အဲဒီကိစ္စတွေကို အရင်တုန်းက Sensitive issue ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှလည်း မလုပ်ကြဘူး။ ကျမတို့က ဆရာဝန်အသင်း အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက် ကတည်းက ကျောင်းတွေမှာ သွားပြီး ၆ တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ အမျိုးသမီး လေးတွေကို စုလိုက်တယ်။ စုပြီးရင် မသဘာဝ ဘာညာပြောတယ်။ သူတို့က သိသင့်သမျှကို သိထားသင့်တယ်။ မသိဘဲနဲ့ စမ်းသပ်တာ အန္တရာယ်များတယ်။ အလင်းရောင်လေးရှိတဲ့ နေရာကိုသွားတာ ကောင်းတယ်လေ။ မှောင်ထဲကို မသိဘဲနဲ့ စမ်းတဝါးဝါးသွားတာ မကောင်းဘူး။ အရမ်း စိုးရိမ်စိတ်ပိုတဲ့ လူကြီးတွေကတော့ ဒါတွေကို ဒီလို အရွယ်လေးတွေမှာ သိအောင် ပြောလိုက်ရင် သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ကို နှိုးဆွသလို ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် မရောက်ခင်မှာကို အတိုက်အခံ လုပ်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးဆရာဝန်အဖွဲ့က မသဘာဝ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။ အဓိက ကတော့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေက ဆယ်ကျော်သက်လို့ ပြောလိုက်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေဘက်က ပိုပြီးတော့ နစ်နာဆုံးရှုံးနိုင်ချေ များတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးတော့ ဦးစားပေးပြောတယ်။ လူနေမှုစနစ်က တံခါးဖွင့်ဆို၊ ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ အကုန်လုံးဝင်လာမယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်က နည်းမှန်လမ်းမှန် အသိမပေးဘဲနဲ့ သူတို့ဟာသူတို့ ရှာဖွေမှာပဲလေ။ ဒါ စူးစမ်းတဲ့အရွယ်၊ အဲဒီမှာ မဟုတ်တဲ့၊ မမှန်တဲ့ အချက်တွေတွေ့ရင် အန္တရာယ် အရမ်းများတယ်။ အဲဒါကို မျှော်တွေးပြီးတော့၊ အတိုက်အခံလုပ်ပြီးတော့ ကျောင်းတွေမှာ မ သဘာဝကိစ္စ ပြောတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အန္တရာယ်က ကိုယ်ဝန်တခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ STD လို့ခေါ်တဲ့ အရာတွေရဲ့ အန္တရာယ်။ AIDS ပဲ လူတွေက ကြောက်တာ။ အသည်းရောင် အသားဝါပိုးတွေ၊ အဲဒါတွေကလည်း တသက်လုံး လူလုံးမလှဘူးလေ။ နောက်ဆက်တွဲ ကင်ဆာတွေ၊ ဘာတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါမျိုး ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ် မဆို လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေက အန္တရာယ် ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ကိုယ်ဝန်ရတယ် ဘာဖြစ်လဲ။ ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် ဖျက်ချလိုက်မယ်။ ဖျက်ချပြီးရင် နောက်အပျိုလိုပဲ နေပြီးတော့ အိမ်ထောင်ပြုကြမယ် ပေါ့နော်။ ဒီလူနဲ့ပဲ ယူရင်လည်း ယူမယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ တိမ်တိမ်လေးမတွေးဖို့ပေါ့နော်။ ကိုယ့်အတွက်က ဘယ်လောက် အန္တရာယ်များလဲ၊ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချတာရဲ့ နောက်ဆုံး အောင်မြင်သွားတဲ့ လူတွေက ဒီလိုပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေကြတယ်လို့ လူတွေက ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့ ဒီလူနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ လူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးယူမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်ကျရင် မရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ သားအိမ်ကနေ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပိုးဝင်တယ်၊ အနာဖြစ်တယ် ဆိုရင် အနာရွတ်တွေ ဘာတွေက သားဥပြွန် ဆင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ဒီထက်ပိုဆိုးတာက မီးယပ်ပိန်၊ မီးယပ်ခြောက် ဖြစ်တာ။ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေး သာယာမှုမရှိတာပေါ့။ ဒါတွေက လူတွေမသိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေပေါ့။ မေး။ ။ ဒီကိစ္စတွေမှာ မိန်းကလေးတွေကို ပညာပေးတယ်ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးတွေကရော အန္တရာယ် မရှိနိုင်ဘူးလား။ ဖြေ။ ။ အဲဒီဟာတွေကို လုပ်တာကျတော့ ဆရာဝန်အသင်းမှာ Reproductive health ဆိုတာ၊ ဆယ်ကျော်သက် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ Mobile Educator တွေ ဆင်းပြီးတော့ ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ယောက်ျားလေး တွေကို ဘာပြောလဲဆိုတော့ သူတို့က ကိုယ်ဝန်မရနိုင်လို့ ကိစ္စမရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ နောက် ကိုယ့်ဆီကနေ တဆင့် STD ကို ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ကိစ္စဟာ အလွန် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပြောတာပေါ့။ ကျမတို့ အကြောက်ဆုံးကတော့ တသက်လုံး ကုနေရမယ်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေမှာလေ။ အဲဒီလိုဆို သူ့လုပ်အားကိုလည်း ဆုံးရှုံးမယ်၊ သူကို ဝိုင်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း လုပ်အားဆုံးရှုံးမယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ နှေးနိုင်မယ် ပေါ့နော်။ အနှောင့်အယှက် ပြုနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်အားလုံးကို ကျမတို့က ကူညီပြီးတော့ တိုက်ဖျက်ပေးတာပေါ့။ မှန်ကန်တဲ့ အသိ သူတို့မှာ ရှိသွားအောင်ပေါ့။ လူငယ် တော်တော်များများက ဒါကိုလုပ်၊ ဒါမလုပ်နဲ့ဆို မကြိုက်ဘူး။ ဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှ တရားမင်မယ် ဆိုသလိုလေ သူတို့ ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့၊ သူတို့အားကိုး စိတ်ချတဲ့ လူကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ Educate လုပ်စေတယ်။ Educate ဆိုတာ ပြောတော့ လွယ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာမှာ Health Education က Education နဲ့ မပြီးဘူး။ Health Promation နော်၊ Promation လာရမယ်။ မေး။ ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ မလိုချင်ဘဲရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကိစ္စ၊ အဲဒါတွေက ဘယ်လောက်အထိ များလာလဲ။ ဖြေ။ ။ အရမ်းများတယ်။ ကိုယ် လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ ဆေးခန်းမှာဆိုရင်လေ အမျိုးကောင်း သမီးလေးတွေလည်း ရောက်လာတယ်။ သူတို့ဟာ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ အပျော်ရှာချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကံမကောင်း အကြောင်း မသင့်လို့ ဖြစ်မယ်။ စောစောကလို Sex Education မရှိတဲ့ဟာ အဓိက အချက်လို့ ထင်တယ်။ ရည်းစားရှိတဲ့ ကောင်မလေး တယောက်ကို သမီးရေ ဒီလိုတော့ မနေနဲ့ ဘယ်အချိန်က ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်တယ်။ ဒါတွေ ကိုယ့်ကို ကျူးလွန်မခံနဲ့ ပြောလိုက်လို့ ရှိရင် ဘယ်အချိန်ကတော့ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုပြီး အဲဒီအချိန်မှာ တခါတည်း ပါသွားမှာ။ အဲဒါ ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ နေလို့ရတယ် ဆိုတာကြီးပါ သင်ပေးသလိုမဖြစ်အောင် အဲဒါ အရမ်းအန္တရာယ် ကြီးတယ် ဆိုတာတော့ ပြောတတ်ဖို့ လိုတယ်။ ကျမတို့က ရယ်စရာပြောတယ် ပေါ့နော်။ ကလေးတွေကို ခိုးစားနည်း သင်အပေးနဲ့ဆိုတာ ကိုယ်ပြောကာမှ သူတို့ ခိုးစားတတ်သွားရင် ဒါကြီးကို ကိုယ်ဝန်လည်း မရနိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုး Attitude ဘက် ရောက်သွားမှာ၊ အရမ်း အန္တရာယ်များတယ်။ မေး။ ။ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ၊ ဥပမာ – ၁၄ နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်ပေါ့။ အဲဒီလိုဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိ၊ ကိုယ်ဝန်လွယ်မိရင် အန္တရာယ် ဘယ်လိုရှိနိုင်လဲ။ ဖြေ။ ။ ဆေးပညာ အလိုအရတော့ ၁၈ နှစ်ကနေ ၃၅ နှစ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ အသင့်လျော်ဆုံးပဲလို့ ပြောတယ်။ ရုပ်ခန္ဓာ အရတော့ အန္တရာယ်တွေတအား မများဘူးပေါ့နော်။ လူတွေက ထင်တယ်၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ဆိုရင် အန္တရာယ်တွေ များတယ်လို့။ အမှန်မှာတော့ သိပ်မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။ စိတ်ကြောင့်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိပြီးတော့ ရုပ်ခန္ဓာ အားနည်းတာတို့ မစားနိုင်တာတို့ သူတို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ရင် သူတို့ အပေါ်မှာ ဒါကြီးက စိတ်ဒဏ်ရာ ရမယ်လို့ ထင်တယ်။ တကယ် အန္တရာယ် များတာကတော့ ၃၅ နှစ်ကျော် ၄၀ သက်ကြီးပိုင်း သားဦးမွေးတာ။ မေး။ ။ အခုအချိန်မှာ Valentine’s Day ကလည်း နီးလာပြီလေ။ Valentine’s Day ဆိုတာ အရင်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ သိပ်ခေတ်မစား ပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း အရမ်း ခေတ်စားလာတယ်။ အဲဒီလို ရက်တွေမှာ စုံတွဲတွေ အတူနေကြမယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီနေ့ အတွက်၊ လူငယ်စုံတွဲတွေ အတွက် စကား လက်ဆောင် တခုလောက် ပေးပါလား။ ဖြေ။ ။ လူငယ်တွေအတွက်တင် မကဘူး၊ အဓိက ကတော့ ဘေးက ဝိုင်းဝန်းပြီး မြှောက်ပေးနေတဲ့ မီဒီယာတွေရယ်၊ စီးပွားရေးသမားတွေရယ် အဲဒါတွေကစပြီး ပိတ်ရမှာ။ ကလေးဆိုတာတော့လေ ဒီလိုပဲ မြှောက်ပေးတော့ သူတို့ဟာသူတို့တော့ ဟုတ်တယ်ထင်နေမှာပဲ။ ဘေးက အရမ်းလိုတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးပေါ့။ ကိုယ့်နာမည် ကြော်ငြာတခု အတွက်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သားကောင်းရတနာ လေးတွေကို ချောက်ထဲ တွန်းမပို့ စေချင်ဘူး။ အဲဒီနေ့ဆို ဟိုတယ်တွေ ပြည့်လို့ဆိုတာ ကြားတယ်။ တည်းခိုခန်း တွေမှာ အကုန်ပြည့်နေတယ် ဆိုတော့ ဒါ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ တံခါးဖွင့်တာ ဟုတ်တယ်။ သို့သော် တံခါးဖွင့်လာရင် စောစောက ပြောသလို ဖုန်တွေ သဲတွေ ဝင်လာတဲ့အထဲမှာ ဒီဖုန်ကတော့ အဆိုးဆုံးပဲ။ ဘဝပျက်နိုင်တဲ့ ဖုန်မှုန်တွေ။ အဲဒါတွေကိုတော့ ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတော့ ဘေးက ပံ့ပိုးမှုကို ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်၊ ဥပမာ – သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ၊ ဒီလို ရိုးရိုးသားသား လေးတွေတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာ ရှိတယ်လေ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယူကာမှသာ ယူရော ဒီရည်းစား တယောက် အနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပေါ်တင်ကြီး ဒါ ကျမချစ်သူပါလို့ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ရော ပြတာတော့ မကောင်းဘူး။ ဘယ်သူ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ဒါကတော့ ကိုယ့်အမြင်ပဲ။ နေရာတကာမှာ ခေတ်ဆန်လွန်းတာ၊ နိုင်ငံခြားကနေ ပုံတူကူးချတာတော့ မကောင်းဘူး။ လူငယ်တွေကို ဘာပြောချင်သလဲ ဆိုတော့ စကားတခွန်းက ချစ်တာက ချစ်ပါ၊ ချစ်လို့ရတယ်လို့။ နောင်တချိန်မှာ နောင်တရစရာ ဆိုတာ ပြန်ပြင်လို့ရမယ့် အမှားဆိုရင် တော်သေးတယ်။ ကိုယ့်ဘဝကို အရိပ်မည်း ထိုးမယ့်ဟာမျိုးကို ဘယ်လိုမှ မလုပ်ပါနဲ့၊ ချစ်သူထားတဲ့အရွယ် ဆိုတာလည်း တနည်းနည်းတော့ ဝေဖန်နိုင်ပြီ၊ စဉ်းစားနိုင်ပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားသလို ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကိုလည်း တန်ဖိုး ထားပါ။ အချစ်နဲ့ Sex ကို မရောထွေးပါနဲ့၊ စောင့်စည်းပြီးတော့ သစ္စာရှိတဲ့ အချစ်ကသာ ဘဝလမ်းကို ဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ ဒေါ်နုနုဆွေ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) ဧရာဝတီ
ငါ့သမီးလေးဟာ ငါ့ကိုတံခါးဖွင့်ပေးမဲ့သူပါ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် ၂၀၁၄ မင်္ဂလာဦး နေ့မှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ အိမ်ကိုဘယ်သူလာလာ တခါးမဖွင့်ပေးကြေးလို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ် ။ ထိုနေ့မှာပဲ ယောက်ကျားဖြစ်သူရဲ့ မိဘတွေ သူတို့ကို ကြည့်ဖို့ သူတို့အိမ်ကို လာကြတယ် ။ ယောက်ကျားဖြစ်သူက တံခါးဖွင့်ပေးချင်တယ် ပြီးတော့ တယောက်ကို တယောက်ကြည့်ရင်း သူတို့ရဲ့ သဘောတူညီချက်အတိုင်း တံခါးဖွင့် မပေးခဲ့ဘူး ။ မိဘတွေလည်း ပြန်သွားကြတယ် ။ ခဏအကြာ ထိုနေ့မှာပဲ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ မိဘတွေ သူတို့အိမ်ကိုလာတယ် ။ မိန်းမဖြစ်သူက မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ကျမ မိဘတွေ တံခါးဖွင့်မပေးပဲ ကျမ မနေနိုင်ဘူး လို့ သူ့ယောက်ကျားကို တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ် ။ သူမက တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့ ယောက်ကျားဖြစ်သူက ဘာမှ မပြောဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်တွေကြာလာတော့ သူတို့မှာ သားလေးယောက်မွေးဖွားခဲ့တယ် ။ နောက်ဆုံး ငါးယောက်မြောက်က မိန်းခလေးမွေးတဲ့အခါ ။ ယေက်ကျားဖြစ်သူက မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဖိတ်ပြီး သမီးလေးမွေးတဲ့အတွက် ပါတီကြီး ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်တယ် ။ မိန်းမဖြစ်သူက သားတွေတုန်းက ဒီလို ပါတီမကျင်းပပဲ အခု သမီးကျမှ ဘာကြောင့် ပါတီကျင်းပတာလည်းလို့ မေးတဲ့အခါ ။ ယောက်ကျားဖြစ်သူပြန်ပြောတာက ။ "ငါ့သမီးလေးဟာ ငါ့ကိုတံခါးဖွင့်ပေးမဲ့သူပဲ ။ သမီးတွေဟာ အမြဲတမ်း မိဘတွေအတွက် ကောင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတယ် ။" ရဲသူရိန်မင်း ဘာသာပြန်ဆိုသည်
ခွေးလိမ္မာ --------------- တစ်ရက်မှာ အသားငါးတွေ ကုန်ခြောက်တွေ ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲကို ခွေးတစ်ကောင်ဟာ တန်းတန်းမတ်မတ် ၀င်လာခဲ့ပါတယ်.. ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူဟာ အဲဒီခွေးကို အကြိမ်ကြိမ် မောင်းထုတ်ပေမဲ့လို့ မောင်းထုတ်ချိန်မှာတော့ ဆိုင်ထဲကနေထွက်သွားလိုက် ခနကြာတော့ ပြန်ဝင်လာလိုက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်နေတာတွေ့တော့ ဆိုင်ရှင်က သူ့စိတ်ထဲမှာ ထူးခြားတယ်လို့ ထင်လာမိပါတယ်.. ဒါနဲ့ ခွေးရဲ့ အနားကို တိုးကပ်သွားတဲ့အခါမှာ ခွေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ကိုက်ချီထားတဲ့စာရွက်ပိုင်းလေးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ပါတယ်.. စာရွက်လေးကို ယူပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ “၀က်အူချောင်း၁၂ချောင်းနဲ့ သိုးခြေထောက်တစ်ချောင်း ရောင်းပေးလိုက်ပါရန်နှင့် ခွေးပါးစပ်ထဲတွင် ပိုက်ဆံ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ” လို့ ရေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်.. ဆိုင်ရှင်ဟာ ခွေးပါးစပ်ထဲကို ကြည့်လိုက်တော့ တကယ်ကို ၁၀ဒေါ်လာတန် တစ်ရွက်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. ဒါနဲ့ ပိုက်ဆံကိုယူလိုက်ပြီး ၀က်အူချောင်း ၁၂ချောင်း၊ သိုးခြေထောက်တစ်ချောင်း၊ ပြန်အမ်းငွေရယ်ကို သေချာ ထုပ်ပိုးပြီး ခွေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်တော့ ခွေးဟာ အဲဒီအထုပ်ကို သေချာကိုက်ချီပြီး ဆိုင်ထဲကနေ ပြန်ထွက်သွားပါတယ်.. ဆိုင်ရှင်ဟာ အဲဒီခွေးအပေါ်မှာ တော်တော်လေးကို စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်.. ဆိုင်ပိတ်ချိန်လဲ ရောက်နေပြီမို့ ထိုခွေးနောက်ကို လိုက်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဆိုင်ကို ကမန်းကတန်း ပိတ်လိုက်ကာ ထွက်ခွာသွားတဲ့ ခွေးရဲ့ အနောက်ကို အမြန်လိုက်ပါတော့တယ်.. ခွေးထွက်သွားတဲ့ လမ်းမအတိုင်း လိုက်ခဲ့ရာမှာ မီးပွိုင့်တစ်နေရာရောက်တော့ လမ်းတစ်ဖက်ကို ဖြတ်ကူးဖို့ပြင်နေတဲ့ ခွေးကို သူ တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. ခွေးဟာ သူ့ပါးစပ်မှာကိုက်ချီထားတဲ့ အထုပ်ကို ချလိုက်ပြီး လူကူးမျဉ်းကို ဖြတ်ကူးသူတွေအတွက် ထားထားတဲ့မီးပွိုင့်က ခလုပ်ကို ခုန်ပြီး သူ့လက်နဲ့ ဖိနှိပ်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ အထုပ်ကို ပြန်ကောက်ချီလိုက်ကာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်.. လူကူးမီးလုံးလေး စိမ်းသွားတဲ့အခါမှ ခွေးဟာ လမ်းတစ်ဘက်ကို ဖြတ်ကူးသွားပါတယ်.. ဆိုင်ရှင်ကလည်း ခွေးနောက်ကို ဆက်ပြီး လိုက်ခဲ့ပါတယ်.. ဘတ်စ်ကားဂိတ်တစ်ခုကို အရောက်မှာ ခွေးဟာ ကားဂိတ်က အချိန်ဇယားကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပါတယ်.. ဆိုင်ရှင်ဟာ အခြေအနေတွေကို အံ့သြစွာ စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်.. အချိန်ဇယားကို မော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက် ခွေးဟာ ခရီးသည်တွေ ကားစောင့်ဖို့ လုပ်ထားပေးတဲ့ ထိုင်ခုံတစ်ခုမှ အကျ ၀င်ထိုင်လိုက်ပါတယ်… ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ရောက်လာတဲ့အခါ ကားရှေ့ကိုသွားပြီး ကားနံပါတ်ကို သွားကြည့်ဟန်တူတဲ့ ခွေးရဲ့ အပြုအမူကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. ပြီးတော့ သူစီးမဲ့ကား ဟုတ်ပုံမရတဲ့အတွက် ထိုင်ခုံမှာ ပြန်လာထိုင်ပါတယ်.. နောက်ထပ် ကားတစ်စီး ထပ်ရောက်လာပြန်တော့ ခုနက အတိုင်း ကားရှေ့ကနံပါတ်ကို သွားကြည့်ပါတယ်.. ဒီတစ်ခါတော့ သူစီးမဲ့ကားဖြစ်ပုံရပါတယ်.. အဲဒီခွေးဟာ ဖွင့်လာတဲ့ ကားတံခါးကနေ ကားပေါ်ကို တက်ရောက်သွားပါတော့တယ်.. လိုက်ကြည့်နေတဲ့ ဆိုင်ရှင်ဟာ ပါးစပ်ဟပြီး အံ့သြတကြီး ကြောင်ငေးကြည့်နေရာကနေ ကမန်းကတန်း ကားပေါ်ကို ပြေးတက်လိုက်ရပါတယ်.. ဒီခွေးသွားတဲ့ ခရီးလမ်းဆုံးထိ သူလိုက်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားမိပါပြီ။ ဘတ်စ်ကားဟာ မြို့ထဲလမ်းကနေ တစ်ဖြေးဖြေး မြို့ပြင်ဘက်က လူနေရပ်ကွက်တွေကို ရောက်လာပါပြီ.. ခွေးဟာလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီး ကားပေါ်ပါလာရင်း တစ်နေရာအရောက်မှာ ထိုင်ရာက ထလိုက်ပြီး ကားရှေ့ပိုင်းကို ထွက်လာပါတယ်.. ပြီးတော့ နောက်ခြေ၂ချောင်းပေါ် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ဘတ်စ်ကား ရပ်တဲ့ခလုပ်ကို ရှေ့ခြေထောက်နဲ့ ဖိလိုက်ပါတယ်.. ကားရပ်ပြီး တံခါးဖွင့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ကားပေါ်ကနေ ဆင်းသွားပါတယ်.. သူ့ရဲ့ပါစပ်ထဲမှာတော့ ဆိုင်ကနေ ၀ယ်လာတဲ့ အထုပ်ကလေးက ကိုက်ချီရက်သားလေးနဲ့ပါဘဲ… ဆိုင်ရှင်ဟာလည်း ခွေးရဲ့ နောက်ကနေ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်ပါသွားပြန်ပါတယ်.. ခွေးဟာ လမ်းသွယ်လေးတစ်ခုအတိုင်း ၀င်သွားပြီးတဲ့နောက် ခြံတစ်ခြံထဲကို ၀င်ရောက်သွားပါတယ်.. ခြံထဲက လမ်းကလေးအတိုင်း လျှောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ တစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံး ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ပါးစပ်မှာ ကိုက်ချီလာတဲ့ အထုပ်ကို လှေကားထစ်ပေါ်မှာ ချလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ အိမ်နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းအထိ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပြန်ပြေးလာကာ အိမ်တံခါးကို သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ ၀င်တိုက်ပါတော့တယ်… တစ်ခါ နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး အိမ်တံခါးကို ပြန်ပြေးတိုက်ပြန်ပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးကို လျှောက်သွားလိုက် ပြေးလာပြီး အိမ်တံခါးကို ကိုယ်လုံးနဲ့ တိုက်ဖွင့်လိုက် အကြိမ်ကြိမ် အခါအခါ လုပ်နေတာကို ခွေးနောက်လိုက်လာတဲ့ ဆိုင်ရှင်ဟာ လမ်းပေါ်ကနေ စိတ်ဝင်တစား ငေးမောကြည့်ရှုနေပါတယ်.. အဲဒီခွေးဟာ သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ တံခါးကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တွန်းတိုက်နေပေမဲ့ အထဲက ဘာတုံ့ပြန်သံမှ မကြားရပါဘူး။ ဒီနောက်တော့ အိမ်နဲ့ ကပ်နေတဲ့ အုတ်တံတိုင်းကြားထဲကို ၀င်ပြီး ပြူတင်းတံခါးကို သူ့ခေါင်းနဲ့ သွားသွားဆောင့်ပါတယ်.. အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြူတင်းတံခါးနဲ့ သူ့ခေါင်းနဲ့ သွားသွားဆောင့်ပြီးတော့ တစ်ခါ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးရှေ့မှာ လာထိုင်စောင့်ပြန်တယ်.. ခဏအကြာမှာတော့ လူခပ်ကြီးကြီးတစ်ယောက်ဟာ တံခါးကို လာဖွင့်ပြီးတော့ ခွေးကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီး လက်သီးတွေနဲ့ထိုး ခြေထောက်တွေနဲ့ ရိုက်နှက်ကန်ကျောက်ပါတယ်. ဒီအခါမှာ လမ်းမပေါ်ကနေ ကြည့်နေတဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာ ဆက်ပြီး ဒီတိုင်း ကြည့်မနေနိုင်တော့တာကြောင့် အပြေးအလွှားသွားရောက်လို့ “ဟေ့…. ဟေ့.. ခင်ဗျား ဘယ်လိုလူလဲ… ဒီလောက်တောင် အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ ခွေးကို ဘာလို့များ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်နေရတာလဲ.. ကျွန်တော်ဖြင့် တစ်သက်မှာ ဒီလောက် ဉာဏ်ကောင်းပြီး လိမ္မာတဲ့ခွေးမျိုး တီဗီထဲမှာကလွဲလို့ အပြင်မှာ ဒီတစ်ခါဘဲ တွေ့ဖူးတယ်.. ခင်ဗျား ဒီလောက်ထိတော့ မရိုက်နှက်သင့်ပါဘူး.. တကယ်တမ်းဆိုရင် ဒီလောက်တောင် တတ်သိလိမ္မာနေတဲ့ ခွေးကို ခင်ဗျားအနေနဲ့ ချီးတောင် ချီးကျူးရမှာ၊ ဒီခွေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ခင်ဗျား ဂုဏ်ယူရမှာ ” ဆိုပြီး ၀င်ရောက်တားမြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီလူက ဆိုင်ရှင်ကို “ဘာဗျ… ဒီလောက်လေးကို အသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ ခေါ်တယ် ဟုတ်လား.. ဒီငထုံ ငအက ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာ သူယူသွားရမဲ့ အိမ်သော့ကို မေ့သွားတာ ၂ခါရှိပြီ.. ဒီလောက် ဉာဏ်နည်းတဲ့ ကောင်ကို ဒီလို အပြစ်ပေးမှ တော်ရုံကျမှာ.. ” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်… ဆိုင်ရှင်ဟာ အဲဒီလူရဲ့ မျက်နှာကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်လိုက်ပြီး “ခင်ဗျားဟာ ကိုယ့်မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာတောင်မှ တန်ဖိုးကို မသိတတ်တဲ့ လူမျိုးဘဲ…. ခင်ဗျားဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးပေး အမြဲတမ်း အပြစ်မြင်နေမဲ့ လူစားမျိုး.. ကိုယ့်အခြေအနေကို ကျေနပ်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ လူမျိုးပါဘဲ” လို့ ပြောလိုက်ပြီး တတ်သိလိမ္မာတဲ့ ခွေးကို တစ်ချက်ငဲ့ကြည့်လိုက်ပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အဲဒီအိမ်ရှေ့ကနေ လှည့်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ A Clever Dog ( Unknow Author) ကို ဘာသာပြန် ဝေမျှပါသည်။ creditးအစိမ်းရောင်လွင်ပြင်blog Credit To : စာအုပ်မြို့တော်
Ben Crane almost aces par-4 at Waste Management
Webb Simpson makesa29-foot putt at Waste Management